င ဝန် န ဒီ: 2011
၂၀၁၁ အကြောင်း တစေ့တစောင်း
မြန်မာပြည် နည်းနည်း လေးပြောင်းလာသည်
ပိုမို ရိုင်းစိုင်းလာသူရှိသလို အများအတွက် အသက်ပေးသွားရဲသူတွေ ရှိပါတယ်
လောလောဆယ် ၂၉ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ က မီးသတ်ပေးရင်း အသက်ပေးသွားရသူ မီးသတ်သမား ၅ ဦး အား ဂုဏ်ပြုချီုးကျူး ရေးသား ဖို့ဒီနေ့ မှ စာတွေ ပြန်ရေးဖြစ်တာပါ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:37 AM No comments:
မျိုးဆက်သစ် မှာလည်း သူ့ သမိုင်း သူ့ အတွေး တွေ ရှိနေ တာပါ...
၈၈၈၈ မှာမွေးလည်း သူ့ သမိုင်း သူ့ အတွေးတွေ ရဲ ရင့်မှုတွေ ရှိနေမှာပါ...
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:38 AM2comments:
မပူပါနဲ့အေးဆေးပါ...
အမေရိကန် က နိူင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စစ် ကလင်တန် လာတော့ လေယာဉ်ပျံ တော်တော် ကောင်းတာကြီးနဲ့ လာသွားပြီး လုံခြုံရေး အတွက် အကာအကွယ်တွေ လုပ်ထားတာကို တွေ့ ရတော့
မြန်ပြည်သား ကလေးငယ်လေး က
သူ ဖခင်ကို မေးသတဲ့ ...
ကျွန်တော်တို့နိူင်ငံတော် သမ္မတကြီး က အဲလို လေယာဉ်ကြီးမျိုး ဘာဖြစ်လို့မစီးတာလည်းဟင်....
သူ့ ဖခင်က ...ဟ...မင်းကလည်း အမေရိကန်က လူတွေ က သေမှာကြောက်ရတာကိုး အဲလို လူမျိုးထပ်ရဖို့ မလွယ်ဘူးလေ...
မြန်ပြည်က သမ္မတကြီး ကအဲလိုမျိုးတွေ ပူစရာမလို ဘူးလေ...
တစ်ခုခုဆို နောက်မှာ တတ်မဲ့သူတွေ ကအဆင်သင့် ပါပဲ..
၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေ မှာတောင် တစ်ခုခု ဆို အချိန်မရွေး အာဏာ သိမ်းလို့ ရတောင်လုပ်ထားတာကို...
ဘာမှ မပူပါနဲ့အေးဆေးပါ... ဥပဒေရှိပြီးသားကွ....
အိုင်ဖုန်း ၄ အက်စ် လည်း အေယူ မှာဆိုတော့ ထူးမခြားနား
ဂျပန်မှာ အိုင်ဖုန်း ၄ အက်စ် ကို ဆော့စ်ဘဏ်နဲ့အေယူမှာ ရောင်းပါတယ် ဆော့စ်ဘဏ်မှာတော့ အိုင်မက်စိပ် (imessage) ဖေ့စ်တိုင်း(Facetime) တွေ ရပါတယ် အဲလိုရတော့ Oversea ရော ဘာရော ဖရီး မက်စ်စိပ် တွေ မျက်နှာမြင်ရတဲ့ ဗွီဒီယို ခေါ်တွေ လုပ်လို့ ရပါတယ်...
အခုတော့ အေယူမှာတော့ လောလောဆယ်အထိ လုပ်လို့ မရသေးပါဘူး ..နည်းပညာပိတ်ပင်မှုတွေ ရှိနေတာပါ.. အိုင်ဖုန်း ၄ အက်စ် ကိုင်သော်လည်း ဖုန်း ရိုးရိုး ကိုင်နေရသလို ဖြစ်နေမှာပါ...
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:36 PM No comments:
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:55 PM No comments:
အိုင်ဖုန်း ၄အက်စ် ဘက်ထရီ စားသက်သာအောင် ပိတ်ရမည့်အရာ....
အိုင်ဖုန်း ၄အက်စ် နဲ့ အတူ ပါလာတဲ့ အိုင်အက်စ်အို ၅ ကနေ အပ်ဒိပ်စ် လုပ်လို့ ရပြီဖြစ်တဲ့ အိုင်အက်စ်အို ၅.၀.၁ ကတော့ ဘက်ထရီ တော်တော် စားတာတွေ့ ရပါတယ်...ဒီအတိုင်း ဘာမှ မသုံးပဲနဲ့ ကို အလိုလိုနေရင်း နဲ့ ကို ကုန်တာပါ တစ်နေ့ ခင်းနဲ့ ကို ၅၀ % လောက်ကို စားသွားတာ..
အစပိုင်း အိုင်အက်စ်အို ၅.၀.၀ တုန်းကတော့ Location Service ကို OFF ထားရင် ဘက်ထရီအစားသက်သာပါတယ်...
အိုင်အက်စ်အို ၅.၀.၁ မှာတော့ အဲလို မရတော့ပါဘူး...အဲဒါပိတ်ထားလည်း ဘက်ထရီ ကုန်နေပါသေးတယ်...
အဲလို မကုန်အောင် လိုက်ကြည့်ပြီးစမ်းလိုက်တာ Settings ကိုသွား ပြီးရင် General ကို ထပ်သွားရပါမယ်...
အဲဒီကမှ တစ်ဆင့် About ကို ဝင်ရပါမယ်...ပြီးရင် အောက်ဖက်မှာရှိသော Diagnostics & Usage ကိုသွားရပါမယ်...
အဲဒီမှာ Automatically Send ကို အမှန်ခြစ်ထားတာတွေ့ ရမှာပါ အဲဒီနေရာမှာ...Don't Send ကို အမှန်ပြန်ခြစ်ရမှာပါ..အဲဒါမှ ဘက်ထရီ အစားသက်သာသွားတာကို တွေ့ ရပါတယ်...
အဲဒါ ကို Don't Send ထားပြီး Location Service ကို ON ထားရင် ဘက်ထရီ နည်းနည်းတော့ စားပါသေးတယ်...
တကယ်တော့ Don't Send ရော Location Service ကိုပါ OFF ထားမှ ဘက်ထရီ ၁၀ နာရီကျော် ခံနိူင်မှာပါ...
လုပ်ကြည့်ရင်းတွေ့ တာတွေကို ရေးတာပါ...သိလို့ တတ်လို့ ရေးတာ မဟုတ်ပါ ဘက်ထရီစား သက်သာအောင်သာ ရေးရတာ ပါ နည်းပညာတစ်ချို့ကို ပိတ်ပင်လိုက်ရတာပါ...
ဘက်ထရီ ကြာကြာခံဖို့တစ်ခြားနည်းမတွေ့ ခင်တော့ ဒီလိုပဲထားရတော့မှာပေါ့...
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:30 PM No comments:
iphone 4s Iso 5.0.1 update လုပ်လုို့ ရပြီ။ဘက်ထရီပိုတောင်စားသွားတယ်...
Iso 5.0.1 update လုပ်လုို့ ရပြီ။Wifi နဲ့ ဆိုကွန်ပျူတာတောင်မလိုပါ။ဘက်ထရီပြဿနာတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။အရင်ကထက်စာရင်တော့ အတော်ကိုသက်သာသွားပါသည်။
တရက်တော့ သက်သာသွားပြီထင်တာ အခုတော့ ပိုဆိုးလာတယ် ဘာမှ တောင်မဖွင့် ရဘဲနဲ့ဘက်ထရီ အကျပိုတောင်မြန်သွားတယ်..
တိုတိုထွာထွာ သတင်း များ
ထိုင်း​-မြန်မာနယ်စပ် မဲ​ဆောက်-မြဝတီမှာ ​သောင်ရင်း​မြစ် ​ရေကြီး​နေလို့​ မြန်မာဘက်ပို့​ဖို့​ ထိုင်း​ ဘက်မှာစုထား​တဲ့​ ကား​စီး​ရေ ၅,၀၀၀ ​လောက် ​ရေနစ်မြုပ်​နေပြီး​ ချစ်ကြည်​ရေး​တံတား​လည်း​ ထိခိုက်ပျက်စီး​သွားပါတယ်။
ကား​အစီး​ ၆၀ ​လောက် ​သောင်ရင်း​မြစ်​ရေထဲ ​မျောပါသွား​တယ်လို့​ သိရ​သည်။အဝေးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်း​က မြန်မာတနိုင်ငံလုံး​ လိုအပ်ချက်က မဂ္ဂါဝပ် ၁၅၀၀၀ ရှိ​ပေမယ့်​ ​နေ့​စဉ် ၆၂၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ပဲ ​ပေး​နိုင်တယ်လို့​ အမှတ် ၁ လျှပ်စစ်စွမ်း​အား​ဝန်ကြီး​ဌာနရဲ့​ အချက်အလက်​တွေကိုလည်း​ ​ဖော်ပြထား​ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား​ပေး​စက်ရုံ​ပေါင်း​ ​ရေအား​လျှပ်စစ်စက်ရုံ ၉ ရုံ၊​ ဓာတ်​ငွေ့​ဓာတ်အား​ပေး​စက်ရုံ ၈ ရုံ၊​ ​ရေ​နွေး​ငွေစက်ရုံ ၆ ရုံနဲ့​ ဓာတ်အား​ခွဲစက်ရုံ ၅၂ ရုံ ရှိ​နေ​ပေမယ့်​ အများ​စု ​တွေနယ်ကလူတွေက​တော့​ ဖ​ယောင်း​တိုင်နဲ့​ ဘက်ထရီကိုပဲ အား​ကိုး​နေရတယ်လို့​ ​ဖော်ပြထား​ပါတယ်။
တရုတ်၊​ ထိုင်း​၊​ ဂျပန်နှင့်​ အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီ​တွေနဲ့​ စာချုပ်​တွေအရ စီမံကိန်း​က​နေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား​ အများ​ဆုံး​ ၂၅ရာခိုင်နှုန်း​သာ မြန်မာပြည်က ရမှာဖြစ်ပြီး​ ကျန်တဲ့​ဓာတ်အား​ကို ကုမ္ပဏီ​တွေရဲ့​ အကျိုး​စီး​ပွား​နဲ့​ နိုင်ငံခြား​ကို ​ရောင်း​စား​ဖို့​ ဖြစ်တယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။
၂၀၀၈ ​အောက်တိုဘာလ ၂၀ ​နေ့​စွဲနဲ့​ ဝီကီလိခ်ကတဆင့်​ ​ပေါက်ကြား​တဲ့​ ​ကြေး​နန်း​စာထဲမှာ ဧရာဝတီ၊​ သံလွင်၊​ ချင်း​တွင်း​မြစ်ကြီး​တွေ​ပေါ်မှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်း​က ပြည်တွင်း​ပြည်ပကုမ္ပဏီ​တွေနဲ့​ ​ရေအား​လျှပ်စစ်စက်ရုံ​ပေါင်း​ ၁၉ခု ​ဆောက်လုပ်​နေပြီး​ ​နေ့​စဉ်မဂ္ဂါဝပ် ၃၀ မှ ၇၀၀၀ အထိ ထုတ်လုပ်မယ့်​ ​ရေကာ​တွေလို့​ ဆိုပါတယ်။
နောက်ထပ် စီမံကိန်း​ပေါင်း​ ၂၀ ကိုလည်း​ နိုင်ငံခြား​ကုမ္ပဏီ​တွေနဲ့​ နား​လည်မှု စာချုပ်ချုပ်ထား​တယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။
လာမယ့်​ နှစ် ၂၀ အတွင်း​မှာ ​ရေကာ​ပေါင်း​ ၂၅၀ ခန့်​ဆောက်ဖို့​ အစိုး​ရက ​မျှော်မှန်း​ထား​ပြီး​ ​နေ့​စဉ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား​ မဂ္ဂါဝပ်​ပေါင်း​ ၄ ​သောင်း​လောက် ထုတ်လုပ်ဖို့​ လျာထား​တယ်လို့​ ​ကြေး​နန်း​စာထဲမှာ ​ဖော်ပြထား​ပါတယ်။
လောလော ဆယ်တော့ တောင်ငူနား က ဆည်တွေ ရေကာတာတွေ ကျိုးပေါက် မှာ စိုးလို့ဆည်တွေ ရေကာတာတွေ ဖောက်ချနေရပါတယ်။
ဆွာချောင်းရေလှောင်တာမံ ၊ ပသိဆည် တို့ ဖောက်ချလိုက်တာကြောင့် တောင်ငူ မြို့ မှာ ရေကြီးနေပါတယ်။ မြို့ အရှေ့ ဘက် ရပ်ကွက်တွေ မှာ ဖြစ်နေတာပါ ရပ်ကွက် ၁၉။ ရပ်ကွက် ၂၀။ ရပ်ကွက် ၈။ ရပ်ကွက် ၉။ ရပ်ကွက် ၁၀ နဲ့ တော်တော် များများ မှာ ရေကြီးနေပါတယ်။
မြန်မာ့ ပင်လယ်ပြင် မှာ လှိုင်းကြီး နိူင်ပါတယ် အမြင့်ပေ ၆ ပေလောက်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:57 PM No comments:
မြန်မာပြည် ကား Show Room ဖွင့်တော့မည်။ ကားဟောင်းဖျက်ပြီး ကားသစ် ဝယ်ခွင့်ပေးမည်။
ကားဟောင်းတွေ ဖျက် ကားသစ်တွေ သွင်းခွင့်ပေးတော့မည်။ ကားဟောင်း အဖျက်ခံရမည့်သူ များက ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ ထက် မကျော်သော ၁၉၉၅ အထက် မော်ဒယ် ကား များ ကို ပြန်တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်။
နှစ် ၄၀ ကျော် ကား က တစ်သောင်း ကျော် နှစ် ၃၀ ကျော်ကား က ရှစ်ထောင်ကျော် နှစ် ၂၀ ကျော် ကား က ၃ သောင်း ကျော် စုစုပေါင်း ၅ သောင်းခွဲ ကျော် သွင်းခွင့်ပေးမည်။
ဂျပန် ကိုရီးယား တရုတ် မလေးရှား ထိုင်း အန္ဒိယ ကနေ Show Room တွေ ကားအရောင်းပြခန်းတွေ လာရောက်ဖွင့်ခွင့်ပေးမှာပါ။
အခွန်ကတော့ နဂို အခွန်ပေးဆောင်ရသလို ပေးရမှာပါ။
ထိုင်း မှာ ပိတ်မိနေ သော ကား က ငါးထောင်ကျော်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
နိူင်ငံခြားဝင်ငွေ ရှိသူတွေ က ဘဏ် အကောင့် ဒေါ်လာ သုံးသောင်း နဲ့လုပ်ငန်း ရှင်တွေ ကတော့ အကောင့် မှာ ဒေါ်လာ တစ်သိန်းပြ နိူင်ရပါမယ်။ အဲလို သူတွေကိုတော့ ကားသွင်းခွင့်ပေးပါမယ်။
မြန်မာတွေ ဘာကားတွေ စီးမလဲတော့ မသိဘူး ကား ကောင်းတာတွေတော့ ဝင်လာမှာပါ။
WEEKLY ELEVEN ဖတ်ပြီးရေးသားပါသည်။
တရုတ် ကားတွေ ဈေးပေါပေါနဲ့ရောင်းလာမှာ မလွဲပါဘူး။ စင်ကာပူက ကားဈေးလောက်တော့ မကြီးလောက်ဖူးထင်ပါတယ် အခွန်တွေ တအားမြှင့် ပြီး ကားတွေ ဈေးမကြီးရင်ကောင်းမှာပါ။
ဂျပန် မှာတော့ ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ အောက် ကားတွေ တော်တော် ရောင်းကောင်း မှာပါ ။ဆူနာမီ ကားတွေ မြန်မာပြည်လာတော့မည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:12 PM No comments:
ပုသိမ် မှာ ၁၁ ရက်နေ့ည ၇ နာရီ ခန့် က မီးလောင်
Weekly ELEVEN မှဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။
ပုသိမ် မှာ ၁၁ ရက်နေ့က မြေနုလမ်း နဲ့ရွှေဆိုင်တန်း ကြား ကုန်သည်လမ်း မှာ မီးလောင်တာပါ။ ဖန်စီ ပစ္စည်းရောင်း ဆိုင်က နေ စလောင်တာပါ။ မီးပျက်သွားလို့မီးစက်ထဲ ဆီထည့် ရင်း မီးခြစ် ခြစ် လိုက်တာကြောင့် ဖြစ်တာလို့ ပြောပါသည်။
ရွှေဆိုင် လေးဆိုင်..ဇင်မျိုးအေး၊ ပြည့်ဝ၊ သရဝဏ်နှင့် ရွှေသမင် အပါအဝင် လူနေဆိုင်ခန်း ဆိုင် ၁၂ ဆိုင်လောက် မီးလောင်သွားသည် လို့ ပြောပါသည်။မိသားစု ၁၀ စု အိုးအိမ် မဲ့ ဖြစ်သွားပါတယ်။ လောလော ဆယ် အမျိုးတွေ အိမ် လိုက်နေ နေကြပါတယ်။
ည ရ နာရီင်္ လောက် ကလောင်တဲ့ မီး ဟာ ည ၁၀ ခန့် တွင် ငြိမ်းသတ် နိူင်ခဲ့ ပါသည်။
လွန်ခဲ့ သော ၁၀ နှစ် က အဖြစ်အပျက် မှတ်မှတ်ရရ
၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက် ရဲ့လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ် က ၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ နေ့က မန်းရေနံမြေ ဝင်းထဲ ကို အလုပ် ပြန်ဝင်ရန် အခန်းထဲ သို့မဝင်ရောက် မှီ စလောင်းကြည့်ရသော အခန်း ကို ခဏ ကြည့် လိုက်စဉ် လေယာဉ် က အဆောက်အဦးထဲ ကို ဝင်တိုက်လိုက်သည် ကို...
ရုပ်ရှင် ရိုက်တာလားမသိ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နေသောလည်း ကြည့်လိုက်တော့ BBC ဆိုတာ ထိုးထားတာတွေ့ ရတော့ သတင်း မှန်းသိရတော့သည်။အကြိမ်ကြိမ် ပြတာ တော်တော် ကို ကြာပါတယ်...
လုံးဝမထင်မှတ်ထားသော အဖြစ်အပျက် ...မယုံနိူင်စရာ သတင်း သို့ သော် တစ်ကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ ကတော့ အခုဆို ၁၀ နှစ် တင်းတင်းပြည့်ခဲ့သလို ......မန်းရေနံမြေ ကနေ အဝေးက နိူင်ငံ တစ်ခုမှာ ရောက်ရှိနေပေမဲ့...
မကြာသေးသလိုတောင် ထင်မှတ်မိတယ် ...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုး နောက်ထပ်မတွေ့ ရ မကြားရလိုပါ။.... အေးချမ်းသော ငြိမ်းအေးသော အရာရာ ဖြစ်စေရန် ရည်သန်လျှက်...
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:18 PM No comments:
ဂျပန် က ပျော်ရွှင်ဖွယ် ပွဲနှင့် ပွဲဈေးတန်း
ဒီနေ့ဆံသ ဆိုင်သွားရင်း အိုဂီဂူဘို မှာ ပွဲ နှင့် ပွဲဈေးတန်း ရှိတယ် ဆိုလို့သွားကြည့် ရင်း ဖုန်းနဲ့ရိုက်လာတာလေးတွေ ပါ။
ကလေးငယ် လေးတွေ နဲ့ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တွေ တော်တော် များများတွေ့ ရပြီး မီးသတ်တွေ ကတော့ လှည့်ပေးနေတာတွေ့ ရပါတယ်။
တစ်ခုကောင်းတာတွေ့ ရတာကတော့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ သေရည်သေရက် သောက်ခွင့် မပြုတာကို လေးစားလိုက်နာတာရယ် ဥပဒေ ကလည်းတားမြစ်ပေးတာလည်းပါမှာပေါ့။
ဘာလိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကိုယ်တိုင် လိုက်နာတာရယ် ရောင်းတဲ့သူတွေ ကလည်း ငွေရတိုင်းမရောင်းတာပါ။
ဂျပန် က ပျော်ရွှင်ဖွယ် ပွဲနှင့် ပွဲဈေးတန်း ....OGIKUBO Station ကနေ သွားရင် နီးနီးလေးပါ။
အီးမေးလ် ကို အဝေးက ပရင့်တာကနေ ထုတ်ရအောင်
တစ်လောက ပရင့်စ်တာတွေ ဈေးကျတာတွေ့ တော့ ဝယ်မလို့ သွားတာ HP printer B110 ကို သွားကြည့်တာ 4480 ယန်းလောက်ပဲ ဆို လို့ လေ...
တစ်ကယ်ဝယ်ဖြစ်တာက HP ENVY 100 printer..အရောင်း ပိတ်တော့မယ်ပြောတာပဲ ...
အိုင်ဖုန်းနဲ့ဝိုင်ဖိုင်ပရင့်စ်တာတွေ ရှာတော့ D410 ကိုတွေ့ တော့ မေးကြည့်တော့ HP ENVY 100 တဲ့...အဲဒါနဲ့အဲဒီ ပုံစံလေး ကြိုက်လို့ ဝယ်ဖြစ်တာ နေရာ အစားသက်သာမယ်ထင်တာရယ် မင်ဗူး နှစ်ဗူး ပဲ သုံးတာရယ် ဝယ်ဖြစ်တာ ဈေးကတော့ ၁၉၀၀၀ ယန်း ပို့ ခ က ယန်း ၁၀၀၀ ထပ်ကျတော့ စုစုပေါင်း ၂၀၀၀၀ ယန်းတော့ ကျပေမဲ့ ကွန်ပျူတာ အဖွင့်အပိတ် မလုပ်လိုပဲ အီးမေးလ် ဖတ်လိုသူအတွက် ကောင်းမယ်ထင်လို့ ရေးတင်လိုက်တာပါ။
နောက်ပြီး မီးအား က 100V ကနေ 240V အထိ သုံးလို့ ရတယ်ဆိုတော့ မြန်မာပြည်အတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။
ံHP printer B110 ကို စမ်းကြည့်ပြီးရင်လည်း ထပ်ရေးတင်ပါ့မယ် ။ ငွေကုန်သက်သာပြီး အသုံးဝင်စေချင်လို့ ပါ။
အခုစမ်းထားတာကတော့ HP ENVY 100 ကိုပါ။
အရင်ကတော့ ကွန်ပျူတာကနေ ဖက်စ် ပို့ လို့ ရလို့စာရွက် အကုန် သက်သာပေမဲ့ ကွန်ပျူတာဖွင့်ရ စောင့်ရတာ ကြာပါတယ်။အဆင်ပြေပြေ ရောက်တာလည်း ရှိရဲ့ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိတာလည်း ရှိရဲ့နိူင်ငံကျော် ပြီး ဖက်စ် ပို့ ရင် အခက်အခဲ အနည်းငယ် ရှိတာကို တွေ့ ရပါတယ်။
အခုတော့ ကွန်ပျူတာ မကိုင်ချင်တဲ့ လူကြီးတွေ အတွက်တော့ အဆင်ပြေစရာတွေ့ ရပါတယ်။
ပရင့်စ်တာ ကို အင်တာနက် ဝိုင်ဖိုင်လေးနဲ့ သာ တွဲထားလိုက်ရင် အဲဒီ ပရင့်စ်တာ မှာ ပါလာတဲ့ အီးမေးလ် ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ် အသစ်လေး လုပ်လိုက်ပြီး သုံးရင် ဘယ်နိူင်ငံက ပဲ အီးမေးလ် ပို့ ပို့အဲဒီပရင့်စ်တာ ကနေ အလွယ်တစ်ကူ ပရင့်စ် ထုတ်ပေးမှာပါ။
အရင်က ပရင့်စ် ရှဲ ကို သုံးကြည့်ဖူးပါတယ် သိပ်အဆင်မပြေလှပါဘူး။စာရွက် အရွက် ၂၀ ပဲ အခမဲ့ ရတာပါ။
အခုတော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်တာပဲ။ အရည်အသွေး ကောင်းလှတဲ့ ပရင့်စ်တာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ လွယ်ကူသက်သာစေတဲ့ နည်းပညာလေးပါတာတော့ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
အိုင်ဖုန်း အိုင်ပက်စ် နဲ့ရော ကွန်ပျူတာနဲ့ ရော ကြိုးမဲ့ အလွယ်တစ်ကူ ထုတ်နိူင်ပါတယ်။
အိမ်မှာ ရှိတဲ့ CANON MP610 ကို သိမ်းထားရပေမဲ့ CD ပရင့်စ်ထုတ်ဖို့ ကိုတော့ CANON MP610 ကို သုံးမှ ရမှာပါ။
နောက်ပြီး HP ENVY 100 က ပုံထွက် စာရွက်ထွက် နှုန်းတွေ ကတော့ CANON လောက်တော့ မကောင်းပါဘူး။
အိုင်ဖုန်း အိုင်ပက်စ် အီးမေးလ် ပရင့်စ် ရယ် ဝက်စ် ပရင့်စ် ရယ် လုပ်လို့ရတာကတော့ ကောင်းပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:10 PM No comments:
“သမ္မတက ခေါ်တာလည်း အမှန်တကယ်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ဥပဒေတွေကလည်း အရင်အတိုင်း မပြောင်းလဲသေးတာလည်း အမှန်ပဲ။
သမ္မတဦးသိန်စိန်၏ ပြည်ပရောက်ရှိနေသူများ ပြန်လာနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုပြီးနောက် ဦးစိန်ကျော်လှိုင်သည် ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ နှောင်းပိုင်းက မြန်မာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေး အရာရှိတချို့ဖြင့် ညှိနှိုင်းကာ ရန်ကုန်မြို့သို့ လေယာဉ်ဖြင့် ပြန်သွားရာမှ ဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်သည်။
“သမ္မတက ခေါ်တာလည်း အမှန်တကယ်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ဥပဒေတွေကလည်း အရင်အတိုင်း မပြောင်းလဲသေးတာလည်း အမှန်ပဲ။ နောက်ဆက်တွဲ ပြည်ပရောက်တွေ ပြန်လာဖို့ ဥပဒေတွေလည်း မထုတ်တော့ဘူး”
ဒီလ ၁၅ ရက်​နေ့​မှာ ကျ​ရောက်တဲ့​ နိုင်ငံတကာ ဒီမိုက​ရေစီ​နေ့​ (International Day of Democracy) အခမ်း​အနား​ကို အစိုး​ရ ရုံး​စိုက်ရာ ​နေပြည်​တော်မှာ ပထမဆုံး​ စတင်ကျင်း​ပ​တော့​မှာပါ။
Super Custom တစ်စီး ကို ဒဏ်ကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၀၀၀ တဲ့ အံစာတုံးပုံဆို ၂၀၀၀၀ ဆိုပဲ။
ဒေါ်လာဈေးကျတာ ကို ပြန်ထိန်းပေးနေလေရဲ့ 
super Custom ကြီးပဲ ၁၂၇၁ စီး ဒဏ်ကြေး ဆောင်ရမယ်တဲ့ အစိုးရက ရမှာက စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၂.၇ သန်းရမယ်တဲ့
မြန်မာမီနီကားတွေ ကိုတော့ သိန်း ၄၀ ထိချရောင်းလို့ ရအောင်လုပ်မယ်တဲ့။
တစ်နေ့ ကို အစီး ၃၀ ထုတ်မယ်ဆိုပဲ။
GSM ဖုန်းတွေ တော့ ၃ သိန်းနဲ့ ချပေးဖို့ တော့ ကြိုးစားနေတယ်တဲ့။
တရုတ်ကြီးကတော့ ယန်စီ ရေကာတာအလုပ်လုပ်တာ ၃ နှစ်ပဲရှိသေးတာ ဟိုဖြစ်ဒီဖြစ်တွေ ဖြစ်လာတော့ သူတစ်နိူင်ငံတည်း အဲလိုဖြစ်တာ အဖော်မရှိလို့ဧရာဝတီ ကိုမြစ်ဆုံမှာ ရေကာတာဆောက်ပေးပြီး ဒုက္ခ အတူတူရောက်ကြရအောင်ဆိုပြီး အဖော်စပ်တာ အတော် အဆင်ပြေနေပြီလားမသိ။
အဲနေရာဒေသမှာနေ အဲမှာမွေး ကြီးစိုးနေတဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေ တောင် မကာကွယ်နိူင်မှာတော့ ကျန်သူတွေ ကတားမြစ်ဖို့ ဆိုတာ လေသေနတ်ပစ်နေသူလိုပေါ့။သူတို့ ကလည်း တရုတ်ကြီး ကို မသိမသာ ကူညီနေရမှန်းမှမသိတာ။တရုတ်ကခြောက်ပစ်ပေးလို့ ပြောထားလားမှ မသိတာ။တစ်ခြား သူတွေ မတားနိူင်အောင်လေ။
တရုတ်ကတော့ သူအထဲ ကျောက်တွေ အရမ်းဝင်လာလို့အခွန် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဆောင်ရမယ်ဆိုပြီး ပြန်ထိန်းချုပ်နေလေရဲ့ ။
လယ်မြေတွေ ကို အရောင်းအဝယ်လုပ်ကြီးပွားသူတွေ ကို ပြန်စီစစ် ထိန်းသိမ်းတော့မယ်ပြောနေလေရဲ့ ။
လွှတ်တော်ထဲမှာလည်း လွှတ်တော် အမတ်ဆိုပေမဲ့ လက်ညိုးထောင်ခေါင်းငြိမ့်နေရသူတွေ တော်တော် များနေတုန်းပါတဲ့။
လွတ်လပ်သော ဒီမိုကရေစီ ကို မြန်ပြည်သားတိုင်း အေးတူပူမျှ ခံစားနိူင်ကြပါစေ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:31 PM No comments:
ပြန်လာချင် ပြန်လာ မလာလို့ ကတော့ နိူင်ငံတစ်ကာနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးဖမ်းမည်
သမ္မတ ကပြောတော့ အဝေးရောက်သူတွေ ပြန်လာဖို့ ပြောတော့ သဘောထားပျော့ပျောင်းပြီး ကောင်းသော ကြိုဆိုမှုတွေ မြန်ပြည်မှာ ရှိလာပြီ ထင်နေတာ အခုတော့ ဗိုလ်ကိုကို က တရားမဝင်သွားရောက်တာ တို့ဘာတို့ ဆိုပြီ အရေးယူလို့ ရတယ် နိူင်ငံတကာ နဲ့ ပူးပေါင်းဖမ်းတော့မယ်လို့ ပြောနေလေရဲ့ မြန်မာ့ အလင်းသတင်းမှာတော့ပါလာလေရဲ့ ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းတစ်ခုခုရှိလို့ဆိုတာ ရယ် ဒုံရင်းကဒုံရင်းအတိုင်းပါပဲ။မြန်ပြည်ကြီးကိုယ်တိုင်ကတော့ အရင်အတိုင်းပါပဲ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:22 PM No comments:
ဂဒါဖီ သား နှစ်ယောက် က တစ်ယောက် တစ်မျိုး ပြောနေကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူတွေ က လာမည့် စနေနေ့ နောက်ဆုံးလက်နက်ချ ဖို့ ပြောနေလေရဲ့ ။
နိူင်ငံ အုပ်ချုပ်ခဲ့သူ တစ်ယောက် ကို ဆုကြေးငွေ ကြော်ငြာ ပြီး အလိုရှိသည် လို့ ကြော်ငြာ ခံနေရတာကတော့ ဗုံလုံတစ်လှည့် ငါးဖျံတစ်လှည့်လေလား။ ။
စင်ကာပူမှာ ကတော့ သူ့ နိူင်ငံသား တွေ အကျိုးအတွက် နိူင်ငံခြားသားတွေ ကို အနည်းငယ်တင်းကျပ်လာနိူင်တယ်လို့ ပြောနေကြပါတယ်။
တကယ်တော့ သံယံဇာတ ဖြစ်ဖြစ်မြောက် မထွက်တဲ့ နိူင်ငံ က ကျောင်းသားတွေ လက်ခံ လုပ်အားခတွေ ကရတဲ့ ဝင်ငွေ ကနေ အခွန်ရ လူနေမှုစရိတ်တွေ ရရှိနေ မှ ဖြစ်မယ့်နိူင်ငံက နိူင်ငံခြားသားတွေ ကို အရမ်းတင်းကြပ်မယ်ဆိုတာ နှစ်ရှည်ဘယ်လိုမှ မလုပ်နိူင်ပါဘူး။
တစ်ခုရှိတာက မြန်မာ ထိုင်း ရဲ့စီမံကိန်းကို မသိမသာ ဖိနှိပ်လိုလျှင်တော့ မပြောနိူင်ပါဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နိူင်ငံတစ်ကာ ကျောင်းတွေ က နိူင်ငံခြားသား ကျောင်းသားတွေဆီက ရတဲ့ ဝင်ငွေ တွေ နဲ့ရပ်တည်နေကြတာပါ။
သို့ မဟုတ်ရင် ဦးနှောက်ဖောက်စား နည်းပညာတွေ ရယူ အကျိုးအမြတ်ရယူနေကြတာပါ။
ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းတက်ဖို့ ကျပ်လာရင်ခဏပါ ဈေးမြှင့်တာတော့ ရှိကောင်းရှိမှာပါ...တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းနဲ့ လက်ခံနေရမှာပါ။
မြန်ပြည်မှာတော့ မြို့ ပတ်ရထားမှောက်လို့ ဆိုပဲ...အသေအပျောက်တော့ မရှိလောက်ဖူးထင်ပါတယ်။ကမာရွတ် နဲ့ လှည်းတန်းဘူတာကြားလို့ ပြောတာပဲ။
မြန်ပြည်ထဲ ပြန်ဝင်တဲ့ မြန်ပြည်သားတွေ ကို တခမ်းတနား ကြိုဆိုတာတွေ တော့ မကြားရသေးဘူး။
မြန်ပြည်သားတွေ သမ္မတ သစ်ကြီး ပြောတာ ကို ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာလား မယုံတာလား တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခု ဖြစ်မှာပေါ့။
လွှတ်တော်ကြီးကတော့ အဆိုတင်လိုက် ပျက်လိုက် တင်လိုက် သဘောတူလိုက် သိပ်မကြားရပေမဲ့ တင်ပြခွင့် ကို လွတ်လပ်စွာ ခွင့်ပြုတာကို ကြိုဆိုစရာပါ။
မြစ်ဆုံ မှာ ဆည်ဆောက်မယ် ဆိုတော့ ဧရာဝတီ ရင်ဘတ်ကို ကျပ်ထုတ်တော့မှာပေါ့...
ရင်ပြည့်ရင်ကယ် နေတဲ့ ယမ်စီ ကို ကြည့်ပြီး ဧရာဝတီ မျက်ရည်စို့ တော့မယ် တစ်ခါတစ်ရံ လည်း ရင်ဘတ်စည်တီး ငိုကြီးချက်မ ဖြစ်ရတော့ မယ်ထင်ရဲ့ 
သတို့ သမီး အဖြစ် မြန်ပြည်ကို ကိုယ်စားပြုတာ ဧရာဝတီ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဧရာဝတီ လွတ်လပ်မှုတွေ မဆုံးရှုံးစေချင်တာပါ...
ဧရာဝတီ ပေါ် ကုန်းကျောင်းလျှောက်ရမယ်ဆိုရင် တံတားတွေ ပျောက် ဒီရေတော တွေ ဖြစ် ဧရာဝတီ တိုင်းမှာ ရေငံတွေ ဝင် အကြံတွေ ကုန် ဂဠုန် ဆားချက် ရမှာ သေချာနေလေရဲ့ ။
ဘာတွေပဲ လုပ်လုပ်ပေါ့ ဧရာဝတီ လည်း ဒီမိုကရေ စီ ရပါစေ မရရင်တောင် ဧရာဝတီ ညင်သာစွာဖြတ်သန်း လွတ်လပ်ခွင့် မဆုံးရှုံးစေချင်တာပါ
ကောင်းတာနဲ့ မကောင်းတာနဲ့အကျိုးဆက်တွေ တွက်တတ် နိူင်ကြပါစေ...
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:12 AM2comments:
The Yangtze River -- the world's third-longest and China's main waterway -- begins in the Tibetan plateau and travels eastward across China, providing fresh water for 400 million people before emptying into the East China Sea at Shanghai.
Some of China's thorniest environmental problems are centered on its great rivers, which have been battered by massive damming, pollution, and habitat change. Here, Chinese policemen navigatealake near the Zipingpu Dam, littered with debris from the May 12, 2008, earthquake in Sichuan province.
The Yangtze is prone to flooding -- one of the problems that Chinese water-control projects are supposed to help remedy. In this photo from September 6, 2008, the river approached the 25-meter (about 80-foot) flood line near the city of Wuhan in central China's Hubei province. This part of the country experiences heavy rain every summer, which is why the Three Gorges Dam was designed to withstand floods so intense they only happen every 10,000 years.
The dam prepares for serious flooding by closing its navigation locks during the peak flow period, which diverts water pressure to the reservoir upstream.
Floods this past summer provided the Three Gorges Dam with its greatest test since the completion of its construction. On July 20, the volume of water hitting Three Gorges reached about 70,000 cubic meters per second -- some of the fastest flowing floodwaters in overadecade. Authorities scrambled to evacuate those located along the flood's path, piled sandbags along the Yangtze's banks, and worked to drain reservoirs. The rains were abnormally heavy -- the Yangtze basin had 15 percent more rainfall in 2010 than in an average year.
Here,aChinese worker cleans up debris of some of the buildings demolished by the floods in Wuhan on July 27.
Posted by ငဝန်နဒီ at 4:19 PM No comments:
အင်တာနက် ကမီးပျက်လို့နောက်တစ်ပတ်လောက်စောင့်ရမယ်ပြောတယ်၊အထိုင်မှာမီးခဏလေးပျက်သွားတာတဲ့။
ပြန်ပြီးဆက်တင် လုပ်ရမှာမို့ လို့ တဲ့။
ပတ်စ်ဝပ်စ်တွေ မပါပဲသုံးလာတာ ၂နှစ်တောင်ရှိပြီ အခုမှ ပြန်လုပ်ရတော့မယ်။
လစ်ဗျား ကသတင်း မြန်ပြည်က ကောင်းခြင်း နမိတ်ဆောင်သောအပြုအ မှုတွေကြားနေရတာဝမ်းသာစရာပါ၊
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:10 AM No comments:
ပြောရက်ပါ ပေ့ မောင်ဘစ်ရယ်...
ရေနံတူးတာမှာ ရှေ့ ဆုံးက ဘစ်ကိုသုံးရပါတယ်။ ဘစ်တွေ က စိန်သွားတွေ တပ်ထားတာနဲ့ တွင်းတူးကြရပါတယ်။
အခုလည်း မောင်ဘစ်ကတော့ ပြောလိုက်တာတော့ အဝေးကသူတွေ ပြန်လာဖို့ ပြောတာ ဘယ်သူတွေ ကို ဆိုလိုတာလဲ။
အပ်တိုတစ်ချောင်းမှ မကိုင်တဲ့သူတွေ၊ အများကို ကူညီမိ လို့ဘဝတက္ကသိုလ်မှာ နှစ် ၆၀ ကျော် ရိပ်သာဝင်နေရသူတွေ ကို အားနာပါဦး
ကွန်ပျူတာလေး နဲ့ စာရေးမိလို့အနားယူနေရသူတွေ ကို အိမ်ပြန်လာဖို့မခေါ်ပေးပဲ
လုံလုံခြုံခြုံ ခေါ်ထားပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ရမှာလားဟင်...
အဝေးကသူတွေ အိမ်ပြန်ချိန်ထက် အနီးကလူတွေ အိမ်ပြန်ချိန်က မြန်ပြည်သားတွေ ဘယ်ဆီကိုပဲရောက်ရောက် ဝမ်းသာစွာကြိုဆိုနေမှာပါ။
အနီးဆုံးလူ တွေ ကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးတာထက် အိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်း ပြန်စားဖို့ ကူညီနိူင်ပါစေ မျှော်လင့်ရင်း
အပြစ်တော့ မတင်ရက်ပါဘူး လုပ်တတ်သလိုသာ လုပ်လိုက်ပါ...အဝေးကသူတွေ ပြန်လာရင် အိမ်မှာဆို လူနည်းနည်းပဲ ဖြစ်မှာ စိုးလို့လူများများနေရာ ဆီ ပို့ ဖို့ စိတ်ကူးမရှိရင်တော့ ကောင်းသော လုပ်ရပ်ဖြစ်လာမှာပါ...
ပြေး ပြေး လွတ်အောင်ပြေး
ချောက် မှာ ဖီးလ်ဆင်းရတုန်း က အတူဆင်းရတဲ့ သူတွေပေါင်းပြီး စလေ ကို သွားလည်ဖြစ်ကြတယ်။
ကြားထဲမှာ ပျင်းရင် ဖုန်းအော်ပရေတာ ဆီဖုန်းခေါ်ပြီး ဖုန်းပြောတဲ့သူနဲ့အညာမှာ ငါး စားမယ်လုပ်တော့ ဈေးသွားတဲ့သူတွေ ငါးတော့ စားလိုက်ရပါရဲ့ဘဲဥ ကို နောက်ရက်တွေ ဟင်းလုပ်လိုက်ရတဲ့ ရက်တွေ တော်တော် များသွားပါတယ်။အဝယ်တော်ကြီး စိတ်ညစ်ပြီးလေ..
အဲလိုနဲ့စလေသွားရအောင် စကားစပြီး စလေသွားလည်ဖြစ်ကြတယ်...
နံနက်ပိုင်း ကားဂိတ်ကနေ စလေကို လိုင်းကားစီးပြီးသွားလိုက်ကြတယ် အဲဒီတုန်းက ကားခ က တစ်ယောက် ကို ၂၀ ကျပ် နဲ့ စီးသွားလိုက်ကြတယ်။
ကို အောင်ကျော်မင်း ကျွန်တော် ရယ် ကိုဇော်နိူင် ၊သောင်းထွန်း ၊ရမ်နရိုင်း၊ တင်မောင်ဇော် ၊ဝင်းဆွေ(ဆွေကြီး)၊ဝင်းဆွေ(ဆွေလေး) တို့ တစ်တွေ စလေကို ချီတတ်သွားကြတာပေါ့...
ဟိုလည်းရောက်ရော ကိုအောင်ကျော်မင်းတစ်ယောက် ငါတို့ တွေ နေရာတွေ မသိလို့ သွားလို့ ဖြစ်ပါ့မလားစိတ်ပူပြီး ဘယ်ကနေဘယ်လို သိလာလည်းမသိတဲ့ ဂျော်ရဂီး တစ်ယောက် နဲ့ သိပြီး အတူတူ သွားကြရအောင်ပြောတော့ ...
မကောင်းဘူးထင်တယ်ပြောပေမဲ့ ရပါတယ်ဗျာပြော ပြီး လိုက်ပို့ ပေးဖို့ ပြော တော့ ဟိုက လိုက်ပို့ ချင်နေတော့...ပျော်ပျော်ကြီးလိုက်လာပြီး လိုက်လာလေရဲ့ 
စလေ ဦးပုည အိမ်ကိုလည်းရောက် စလေက ဗဟိုရ်စည်ကြီး စင်ပေါ်တတ်ပြီး တီးလိုက်သေးတယ် မကြီးမငယ်နဲ့ မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့ 
တီးဖူးတယ် ရှိအောင် မသိသလို လုပ်ပြီး တီးဖြစ်ကြသေးတယ်။
တစ်နေ ကုန် လိုက်ကြည့်ကြပြီး ဂျော်ရဂီးတစ်ယောက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောပြီး တစ်ခုခု လိုက်ကျွေးပြီး ပြန်တော့မယ်လုပ်ကြတာပေါ့။
အဲဒီကျမှ ဂျော်ရဂီး က ချောက်အထိလိုက်မယ် လုပ်ပြီး လိုက်အိပ်မယ်လုပ်တော့...
အကုန်လုံး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့...
ဘယ်လိုမှ ခွာမရဖြစ်နေတော့ မထူးတော့ဘူးဆိုပြီး
စလေက လိုင်းကားကို စင်းလုံးငှားပြီး စင်းလုံးဆိုလို့၂၅၀ ကျပ်တည်းပါ။ ပြန်လာကြတာပေါ့ လမ်းမှာ လည်း ကားသမားတွေ လူတင်ချင်တင်လို့ ပြောပြီး ဂျော်ရဂီး ခေါ်ပြီးပြန်တယ် မဖြစ်ရအောင် ရယ်...အဆောင်အထိ နာမည်ကတော့ အကြီးတန်း အရာရှိ ရိပ်သာ ကုန်းဆင်းအထိ ငှားလာလိုက်တော့...ဂျော်ရဂီး က ပါ ပါလာတော့ ကားရပ်တာနဲ့ရိပ်သာ ကို မပြန် နိူင်ပဲ
အသီးသီး အရက်ဆိုင်ပြေးသူက ပြေး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပြေးသူပြေး နဲ့ကားခေါင်မိုးပေါ် စီးလာတော့ အသီးသီး ပြေးလိုက်ကြတာ
ကျေးဇူးကန်းသလိုများဖြစ်သွား မလားသိပေမဲ့ သဘာဝမဟုတ်တာကို အားမပေးရဲ လို့ 
ပြေးနိူင်မှ လွတ်မယ်ဟေ့ ဆိုပြီး လွတ်အောင်မနည်းပြေးလိုက်ကြရတယ် ရိပ်သာကို တော်တော်နဲ့ ဘယ်သူမှ မတတ်ရဲဘဲ ညတော်တော်မှောင်မှ ပြန်ကြရတယ်....
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:09 PM No comments:
စားသာ စား နောက် တစ်လုံးကျန်သေးတယ်
ပုသိမ်မှာ ကျောင်းတတ်တုန်း က ကျောင်းအတူတူ တတ်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ပြန်တွေ့ တော့
သူကလျှပ်စစ်ဝင်းထဲမှာ ငှားနေတော့ သူဆီသွားလည်တော့ သူက ထမင်းလိုက်ကျွေးတော့ မကျွေးနဲ့ ပြောလည်း မရတာနဲ့ 
ထမင်းဆိုင်သွားပြီး အတူတူ သွားစားကြတော့
သူ က ထည့်စား ကွာ ဘာမှ မပူပါနဲ့ ကွာ ပြောပေမဲ့ ကျောင်းတတ်နေတဲ့
သူအချင်းချင်း ဆိုတော့ သိနေတော့...ထမင်းလည်းဝနေတာနဲ့ ရပါပြီ ပြောတော့
ပါလာတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းက စားသာစား နောက်တစ်လုံးကျန်သေးတယ်တဲ့...
ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်း က...ကာကလေတာပေါင်ထားတာပါ ကွာ ငါ မှာ နောက်တစ်လုံးကျန်သေးတာကို ပြောတာပါ...
သူတို့ တွေ ယူပေါင်ချင်တာ မပေးလို့လာပြောနေတာ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းရဲ့ စေတနာ ကတော့ အေးတူပူမျှ ဖြတ်သန်းကြရတာပျော်စရာလေးပါ။
အခုတော့ သူလည်းစင်ကာပူ မှာ ၂၀၀၄ က ပြန်တွေ့ ပေမဲ့ ပြန်မတွေ့ တာတောင် အတော်ကြာသွားပါပြီ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းအတွက် ဆို ရသလိုလုပ်ပေးတဲ့အဖြစ်လေးကို အမှတ်တရ...
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:25 PM No comments:
တိုတို ထွာထွာ ကြားရသမျှ
အခွန်တချို့ တွေ ကို ကင်းလွတ်ပေးမယ်တဲ့
ပါတီတစ်ခု ကားသွင်းခွင့် ရရင် နောက်ပါတီတွေ ပါ ကားသွင်းခွင့် ရမှာပါတဲ့...
ပါတီဆိုတာ အခွင့်ထူးခံတစ်ခု ဖြစ်လာတော့မဲ့ သဘောပေါ့
ဒီမိုကရေစီ နိူင်ငံ ကြီးမှာ ဆူပူမှုတွေ ပေါ်တော့ လူသတ်ပြီး နှိမ်နင်းတာပါပဲ ဖမ်းလိုက်တာ ထောင်ဂဏန်းရောက်နေပါပြီ
ကမ္ဘာမှာ ရှယ်ယာတွေ ကမောက်ကမ ဖြစ် သတ်သေတဲ့သူတွေ ကသတ်သေကြ
ရွှေတွေ လိမ့်ဝယ်တော့ ရွှေဈေး ကတအားထိုးတတ်သွားလေရဲ့ 
ကာစီနိုလုပ်မဲ့ သဘောင်္ကနေ လေယာဉ်တင်သဘောင်္ လုပ်လိုက်တော့ လောင်းကစား လုပ်မဲ့သူတွေ လေယာဉ်စီးပြီး လူလိုက်သတ်ဖို့ လုပ်ရတော့မလို ဖြစ်နေလေရဲ့ရီဆိုဒ်ကယ် လုပ်တာတော့ တော်ပါပေတယ်
တိုက်ရိုက်ဝယ်ရင် ရှက်လို့သွယ်ဝှက်ပြီးမှ ဝယ်ရတယ်လို့ ။
အကျိုးအမြတ် မရနိူင်တဲ့ နိူင်ငံတွေ ဆို ရင် ဘယ်လောက်ပဲ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားတဲ့ နိူင်ငံတွေ က လူတွေ ဘယ်လောက်သေသေ စစ်ရေး အရ ဝင်မစွက်ပါဘူး။ထောင်ဂဏန်းချီပြီးသေနေတာတောင် ဘာမှ ဝင်မကူပါဘူး။
အကျိုးအမြတ်ရမှ နော် ဒီမိုကရေစီ ကလည်း ဒီလိုရှိသားလား။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:54 PM No comments:
ထရံပေါက် က နေခြည်ပျောက် ကောက်မရနိူင် အလင်းရောင်တော့ရပါ၏။
အခုတလော ကြားရတာတွေ ကတော့ အများကြီးပါ တွေ့ တာတွေ အကြိမ်တော်တော်များလာ မှ နှစ်ချီနေပြီနော် အခု မှ နေခြည်ပျောက်လေးတွေ့ ရတာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတဲ့ ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ရင်းပေါ့။
အလင်းတန်းတစ်ခု လင်းလက်သွား သလိုပဲပေါ့။
သုံးတတ်ရင်တော့ လုပ်စရာတွေ အများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့။
တဖက်ကတော့ ဥပက္ခာဆိုသလို ပေးဆပ်လိုက်ရတာတော့ ရှိမှာပေါ့။ တဖက်ကလည်း သူအန္တရာယ် အတွက် ကြိုကာနေရတာတွေ ရှိတာပေါ့။ အဲဒီကြား မှာ အခုမှ လမ်းလေး နည်းနည်းကောင်းလာသလို ရှိလာတာပါ။
မိုးရွာ မှာ ကိုလည်းကြောက်နေရသေးတယ်လေ...မပျက်မစီးဘဲ လမ်းကောင်းကြီး ဖြစ်လာရင် မြန်ပြည်သူပြည်သားတွေ အတွက် အကောင်းပဲ ဖြစ်လာမှာပါ...
လမ်းဆိုးကိုသွေဖယ်သော အတွေး တွေ မရှိတော့မှာ သိသာလာမှာပါ။
အခွင့်အရေး ကို အသုံးချတတ်သူ နဲ့ဖေးမခွင့်ပြုသူတွေ ဖြစ် လာရင် နောက် လေးငါး နှစ်လောက်ဆို ရင် ကောင်းသွားမှာပါ။
ချက်ချင်းတော့ မဖြစ်နိူင်သေးပါဘူး။အရမ်းကြီးမျှော် လင့်လို့ မရပေမဲ့ မြန်ပြည်အတွက် နေခြည်ဖြာ စပြုနေပါပြီ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:34 PM No comments:
နေ့ ရက် များရဲ့အတိတ်ကို တမ်းတခြင်းထက် ဖော်ဆောင်ရယူခြင်း
တချိန်က ရှစ်လေးလုံးက မြန်ပြည် အတိတ်ကို စည်းရုံးခြင်းအင်အားတွေ ဒီမိုကရေစီ အသိတွေ ရရှိခဲ့ကြပါတယ် လွဲမပေးမှုတွေ လက်နက်အားကိုး အနိူင်ကျင့်ခံ ရမှုတွေ နဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ကြတယ်
လူငယ်တွေ ဘဝတက္ကသိုလ်မှာ နှစ်ရှည်တတ်နေရ ရတာတွေ အသုံးချခံခဲ့ရတာတွေ ပြီးရင် နိူင်ငံရေးစားဖားကြီးတွေ နေရာတကာမှာ နေရာ ရယူတာပဲရှိပြီး ဘာမှ လုပ်မပေးနိူင်တာကို တွေ့ ရမှာပါ...
ဒါဆိုတော့ အခုလူငယ်တွေ မျိုးဆက်သစ်တွေ အသုံးချခံရခြင်းထက် မိမိ ကိုယ်ပိုင်ရသင့်အခွင့်အရေးကို ရယူလာကြတာတွေ့ နေရပါပြီ။
ရလည်းရနေကြပါတယ်...ဝမ်းသာစရာပါ...ဒါပေမဲ့ မိမိတို့ ရရှိရမည့် အခွင့်အရေးတွေ ၊ နိူင်ငံငွေကြေးတွေ ကို အခွင့်ထူးခံတွေ အတွက် ဖြစ်နေတာကို မသိမသာ မီးမောင်းထိုးပြ ရယူလာနိူင်မယ် ဆိုရင် တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေလာမှာပါ။
မိမိ လုပ်အားခ ရသင့်တဲ့တာတွေ တောင်းဆို မှားယွင်းနေတာတွေ ကို မသိမသာ ပြသနိူင်ရင် အကျိုးရှိလာနိူင်မှာပါ။
တလောက ဘောလုံးပွဲ ဆို မြန်ပြည်သားတွေ ရိုင်းစိုင်းလာလို့ ထင်စရာပါ။
အဲဒီလို လုပ်အောင် နောက်ကွယ်က စီစဉ်တာတွေ များ ရှိနေသလားမှ မသိတာ မစားရ အမဲ သဲနဲ့ ပက်တတ်သူတွေ လိုပေါ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝါးရင်းတုတ် ကိုင်ပြီး လူရိုက်ပေးရင် ငွေ ပေးခဲ့တာတွေ က အခု အဲဒီလို ပြန်လိုချင်သူတွေ ရှိနေတာ သင်ပေးခဲ့တာတွေ ကို နိူင်ငံတကာ ပွဲ မှာ ပြန်ကျင့်သုံးကြည့်တာနေမှာပါ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ်ကတော့ ကြားကခံလိုက်ရတာပေါ့
နေရာတကာ မှာ ဒီလိုမျိုးတွေ ဘယ်လောက်ရှိနေမလည်း ဆိုတာ မြန်ပြည်သားတိုင်းသိနေမှာပါ။
ဟိုအနားရေကြီး ဒီနားရောကြီး ဆိုတာတွေ ထက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ အစိုးရသစ်မှာ တာဝန်ရှိနေပါပြီ။
အရင်လို လိုက်ကြည့်နေယုံပဲဆို ထူးမခြားနား လိုပဲဖြစ်နေမှာပါ။
ဟင်္သာတ တာရိုးတို့ပုသိမ်ကမ်းနား က ငဝန်မြစ်ရေတွေ က နှစ်စဉ် ရေတတ်တာ အခုဆို လူတွေ ပါထိခိုက်လာတာတွေ ရှိလာတာပါ။
တကယ်တော့ ဆည်တွေ ဆောက်ထားပေမဲ့ သိပ်အကျိုး မသက်ရောက် နိူင်တာတွေ မထိန်းသိမ်းနိူင်လို့ဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေ ရောက်နေရတာပါ။
ကားခိုးသွင်းတာတွေ တလောကမိသွားတော့ မြန်ပြည်မှာ အဲဒါမျိုးတွေ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်တောင် ရနေကြသလည်း
တခုထူးတာက အထူးအဖွဲ့ တွေ ရှိတုန်းက မဖမ်းတာတွေ အခုမရှိတော့မှ ဖမ်းတာပါပဲ...
အထူးအဖွဲ့ ဆိုတာ အကုန်ခိုးသွင်း လို့ ရတာဖြစ်မှာပါ။အခွင့်ထူးခံတွေ အတွက် သီးသန့် လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တာနေမှာပါ။
ဒါမျိုးတွေ များများပေါ်လာပြီး တရားဝင် မြန်မာ ပြည်မှာ နိူင်ငံတကာက ကားတွေ လာရောင်းချတာမျိုး ရှိဖို့ လိုနေတာကို အခွင့်ထူးခံတွေ ကြားကနေ ရယူနေတာပါ။
မြန်မာပြည် မှာ ရွှေဈေးကတော့ နိူင်ငံတကာ ရွှေဈေး ကို မမှီသေးလို့ ပြောနေပေမဲ့ ဆီဈေးက ပိုနေတာကိုတော့ နှာစေးနေကြပါတယ်။
အခွင့်ထူးခံတွေ ငွေကြေး အရမ်းရနေမှာပါ။
မြေဈေးတွေ မတရားတက်နေတာ နောက်ကွယ်က အဖြေကို ဖော်ထုတ်နိူင်ဖို့ လိုပါတယ်။
နိူင်ငံခြားသားတွေ ကို တရားဝင်ရောင်းချတာမျိုးတွေ ကို ဥပဒေ လက်တလုံးခြား ရောင်းချနေလို့ ပါ။ဒါတွေ ကို မဖော်ထုတ်မနိူင်မချင်း မြန်ပြည်သားတွေ အတွက် မြေဈေးတွေ ကြီးမြင့်နေမှာပါ။
ပိတ်ထားသောအိမ်တွေ ချိပ်ပိတ်တာထက် အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်သူတွေ ကို စီစစ်လိုက်ပြီးပြည်သူပိုင် ပြန်သိမ်း လေလံ ပြန်ပစ်လိုက်ရင် နိူင်ငံငွေကြေး တောင့်တင်းလာမှာပါ။
လာမဲ့ ၂၂ ရက်နေ့ ကြရင် တခုခု ထူးလာရင်တော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိူင်ပါစေ လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် ။
နည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်နိူင်ပါစေ။
မြန်မာဘလောက်စ် နဲ့ စမ်းတင်ကြည့်တာပါ။ဂျပန်ယမ်းနဲ့ ဆို ၈၅ ယန်းပါ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:41 PM No comments:
အိုင်ဖုန်း ၄ ကို ကြိုးမဲ့ အားသွင်းရအောင်
တစ်နေ့ က နာဂါနို ဟုမ်းအရောင်းဆိုင် ကို ရောက်သွားတော့ ကြိုးမဲ့ အားသွင်းစက်ကို တွေ့ တော့ အွန်လိုင်းမှာ ရှာကြည့်ပြီးတင်လိုက်တာပါ...ကြိုးမဲ့ ကြိုက်သူတွေ အတွက်ပေါ့..
တရုတ် နဲ့တခြားက ထုတ်ထားတွေတော့ ရှိပါတယ် ဒီအမျိုးအစားလေးကို ကြိုက်လို့ ပါ။
ကြာနေတဲ့ပစ္စည်းလားတော့မသိ မအားတာနဲ့အခုမှ သိလို့ တင်တာပါ...
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:48 PM No comments:
ရေးချင်တာကတော့ ရန်သူကို ဆက်ဆံရာဝယ်
ရန်သူနဲ့ ဆက်ဆံရာဝယ် ...ရေးချင်တာရှိပါတယ်...နယ်ဆင်မန်ဒဲလား ရန်သူနဲ့ စကားပြောခြင်း လို မဟုတ်ပေမဲ့ ...ဆက်ရေးပါမယ်..
တကယ်တော့ ရန်သူ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း ကို မသုံးချင်ပေမဲ့ ရန်အမြဲ အလိုခံခဲ့ရသူတွေ အတွက်ကတော့ ရန်သူဆိုတာနဲ့ ပဲ သင့်လျှော်မယ်ထင်လို့ ပါ။
အဲဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ ဆက်ဆံတော့ အမြဲတမ်း ခံခဲ့ရတာတွေ ကြီးပဲ များပါတယ် အခွင့်အရေးကို ဆုပ်ကိုင်နိူင်ခွင့် ရချိန်မှာ ရယူစေချင်တာပါ။
တကယ်တော့ လောကပါလ တရားနားမလည်သူကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်တော့...ဘဝတက္ကသိုလ်တွေ အကြိမ်ကြိမ်တက်ရသူတွေ များလာတာကိုပဲ တွေ့ ရပါတယ်...
အကြင်နာတရား အမှန်တရား တရားမျှတ မှုကို မကြည့်သူကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်လို့ ဖြစ်တာကိုး...
ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မယ်ဆို အောင်မြင်မှုထက် ရှုံး နိမ့်မှုက များနေတော့ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော သွယ်ဝိုက်သောနီးဖြင့် ရင်ဆိုင်တက်မှ ဖြစ်မှာပါ။
စာတွေ တတ်လာမှာ ကြောက်တဲ့ ရန်သူ ကို စာတွေ သင်ပေးတဲ့ ဆွဲဆောင်မူနဲ့ 
မတရား ခံရသူတွေ အတွက် ပံပိုးကူညီခြင်းထက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ လုပ်နည်းစနစ်တွေ ချပေးတာတွေ လုပ်ရမှာပါ။
ကလေးတွေ အသက်မပြည့်ပဲ လုပ်ဆောင်နေရတာတွေ ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ ကို ဖြစ်တတ်တဲ့နေရာတွေ ကို သတင်းလွင့် မသွားဖို့နေရာ သတ်မှတ်ပေးတာမျိုးတွေ ပါ။
မူလပထမ အခွင့်အရေး ဆိုတာ ကို တောင်းဆိုခြင်းထက် မသိမသာ ရယူတတ်ဖို့ လိုမှာပါ...
စနစ်တကျ စီစဉ် အကွက်ချ ထောက်ပြ ရယူ နိူင်အောင် နည်းလမ်း ရယူရမှာပါ...
ကလေးတစ်ယောက် ကျောင်းရောက်ဖို့နယ်ကျောင်းသားတစ်ယောက် အစိုးရ အဆောင်ရဖို့စတိုင်ပင်ရဖို့ပါ။
သွားခွင့်ရနေရာ ကို ရန်သူ ကို အသုံးချ သွားလာခြင်းဖြင့် ဘေးကင်း အောင် လုပ်ရင်း လုပ်ချင်တာကို လုပ်ယူနိူင်မှာပါ။
ပြိုင်ဘက်ကောင်း လိုသတ်မှတ် သွယ်ဝှိက်ခိုင်းစေ..
ရန်သူဟာ ဘယ်တော့မှ မိတ်ဆွေ ကောင်းဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပေမဲ့
မိတ်ဆွေလိုသတ်မှတ် ပြိုင်ဘက်ကောင်း လိုသတ်မှတ် နိူင်ရမှာပါ...
မိတ်ဆွေ လို ဖြစ်လာပေမဲ့ တချိန်ချိန်မှာတော့ ရန်သူ အချိန်မရွေးပြန်ဖြစ်နိူင်တာပါ...
မိတ်ဆွေကနေ ရန်သူဖြစ်သွားတာသာ ရှိတာပါ... ရန်သူကနေ မိတ်ဆွေကောင်း လို ဖြစ်သွားတာ နည်းပါတယ်...
အထုံးလေးကတော့ အမြဲရှိနေတာပါ....ဖယောင်းသုတ်ချောထားတာပါ ...အချိန်မရွေးပြန်ပျော် နိူင်ပါတယ်...
သူကဥပဒေဘောင်တွင်း ဆို ကိုယ်လည်း ဥပဒေဘောင်းတွင်းကနေ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိ အဖွဲ့ခွဲ ရှိနေမှ ပြိုင်ဘက်ကောင်းလို သတ်မှတ် နိူင်ပြီး ယှဉ်ပြိုင် နိူင်မှာပါ...
ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တာ ရှိရသလို ပြိုင်ဘက်ကောင်း ပါ ထားနေရမှာပါ...
ပြိုင်ဘက်ကောင်း ကို လုပ်ချင်တာတွေ ကို ဆွေးနွေး ဖြစ်ချင်တာတွေ ကို လုပ်ရင်းနေရာ ယူ လာရင် ပြိုင်ဘက်ပါ လိုက်လုပ်လာပြီး ပြိုင်ဘက်ကို ခိုင်းစေလာနိူင်မှာပါ။
လူမှုရေးအရင်းအမြစ် အသုံးချ ကူညီခြင်း
နေရာတကာမှာ လူမှုရေးအကြောင်းပြုပြီး အင်အားကြီးမားအောင်လုပ် စွမ်းအင်ကိုထုတ်နူတ် နေရာယူ ရန်သူ ဘောင်တွင်း ကနေ ယှဉ်ပြိုင် နေရာ ရအောင်လုပ်ရမှာပါ
ဘယ်နိူင်ငံမှာမဆို စည်းဘောင်တအားများနေရင် လူမှုရေးကတော့ ခွင့်ပြုရပါတယ်...
နိူင်ငံရေး အသုံးချဖို့ တစ်ခုထဲကိုပဲ လုပ်ရင်တော့ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး
ကွန်ယက်တွေ လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ စေတနာမပါ နိူင်ငံရေး အသုံးချ ရုံသက်သက် တွေ အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက် နယ်ကို မရောက်လို့ ကတော့ ထူးမခြားနားပါပဲ...
၁၉၉၆ ကဆို ကျောင်းသားတွေကလုပ်ပေမဲ့ တကယ် ပါသင့်သူတွေ ဘေးရှောင် အခွင့်အရေး အော်ပေး ပါသာပြောပြီး အသုံးချခံသာ ဖြစ်သွားပြီး နောက်မှ စာထုတ် အလုပ်ရှုပ်သယောင် လုပ်နေတာမျိုးတွေ ကတော့ ဘယ်တော့မဆို ပန်းတိုင်ဝေးဝေး ကျောင်းဆွေးဆွေးသာဖြစ်သွားတယ်...
သမိုင်းကို နောက်ချန်ထား မသိကျိုးကျွန်ပြုလို့ မရပါဘူး ...အဖြေမှန်တွေ ထွက်ထွက်လာနေမှာပါ။
စစ်မှန်တဲ့ လူမှုရေးကူညီမှုကနေ ရသင့်တာတွေ တစ်နေ့ ရမှာပါ...
အိုင်ပက် ၂ လစဉ်ကြေး
အိုင်ပက် ၂ အင်တာနက် သုံးတာ လစဉ်ကြေးက စစချင်းလကတော့ ၆၅၀၀ ယမ်းကျတယ်။ နောက်လတွေတော့ ၂၅၆၉ ယမ်း ကျပါတယ်။
အင်တာနက် 3G နဲ့ သုံးတာ အင်တာနက်ဖုန်းပါပြောလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 4:02 PM No comments:
နိူဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် နှစ်ဦးတွေ့ 
နိူဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တိဘက် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်ကြီး ဒလိုင်းလားမား (Dalai Lama) နဲ့ အိမ်ဖြူတော်က အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်အိုဘားမား (Barack Obama) တွေ့ ဆုံခဲ့ပါတယ်။ စနေနေ့ကတံခါးပိတ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 3:58 PM No comments:
ပင်စင်စားများ ရဲ့ ထောက်ခံစာ..
ပင်စင်စားတွေ လစာပင်စင်တိုးမယ် ဆိုတော့ ထောက်ခံစာတွေ ပြန်လုပ်ရတော့
သိသလောက်တော့ တော်တော် အဆင်ပြေတယ်ကြားရပါတယ်...
ငဝန်နဒီ ရဲ့ ဖခင်အတွက်ရတဲ့ မိသားစု ပင်စင်ဆို ၁၉၉၆ က တည်းက ရနေတာ အခု ပင်စင်တွေတိုးတော့ အကြောင်းထပ်ကြားလာပြီး ရန်ကုန်ကနေ ပုသိမ်ကို သွားလုပ်ရမှာဆိုတော့ နေ့ ချင်းပြန်ရအောင်ကြိုလုပ်ထားပေးမယ်လို့ တောင်ပြောတာ..
ဖခင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ရုံးက ရေနံမြေ အုန်းတောမှာဆိုတော့ အဝေးပြေးဂိတ်နဲ့ ဆို ပုသိမ်ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်...
ကားအဆင်ပြေလို့ကိုယ်ကားနဲ့ ကိုဆိုရင်တော့ မောင်းချိန်ပြန်ချိန် ထမင်းစားချိန်လောက်ပဲကြာမှာပါ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပင်စင်စားတွေ အတွက်လုပ်ပေးရတဲ့သူတွေ အတွက် အားလုံးက လိုလိုလားလား ကူညီတာကိုရေးတာပါ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 3:37 PM No comments:
ပုသိမ်သား ကန်သုံးဆင့် ကန်တွင်းက ဒိုင်ဗင်
တနေ့ဖိုးစပ်နဲ့ အတူ ကန်သုံးဆင့်ဘက်သွား ယင်း ဖိုးစပ်က ရေကူးချင်တော့
ဟာ ဟိုဘက်က တံတားဘက်မှာ သွားကူးရင်ကောင်းမယ်ပြောတော့..
အေးဆိုပြီး တံတားလေးရောက်ရော ပုဆိုးချွတ်ပြီး တံတားပေါ်ကနေ ဖိုးစပ်တယောက် ဒိုင်ဗင် ထိုးဆင်းသွားတာ
ဗွမ်း ဆိုပြီး ပြန်ပ်ါလာတော့မှ...မောနေသံနဲ့ 
ဘာဖြစ်တာလဲ ဆိုတော့ ...
ဒိုင်ဗင်ထိုးဆင်းတော့ ရေထဲမှာ ဘောင်းဘီကျွတ်သွားပြီး.. ဘောင်းဘီပျောက်သွားလို့ မနည်း ရှာလိုက်ရတယ်...
ဖြစ်ရမယ်...ပုသိမ်သားကတော့ ဒိုင်ဗင်ထိုးတာတောင် ဘောင်းဘီကျွတ်အောင်ကို ထိုးတာနော်...
Posted by ငဝန်နဒီ at 3:26 PM No comments:
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ စာတွေ ကဗျာတွေ ကို ဖတ်ရင် အမည်မသိ ရှေးစာဆို ကို လေးစားလိုက်ရတာ ဒီလို ဘလော့စ်တွေ မှာ တော့ အမည်မသိ ဆို ရင်တော့ ဗုံမဟုတ် ပတ်မဟုတ် တွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်...
ဒူးယားဆောင်မှာ နေတုန်းကတော့ အဲလို လူတွေ အတွက် ဂျယ်မုဆိုး တွေ ရှိတော့ ပေးတွေ့ စေ ချင်လိုက်တာ...
ဒါထက်မက ရေးချင်သေးတာ စာလာဖတ်တဲ့ အမျိုး သမီး တစ်ချို့ကို လေးစားလို့ဆက်မရေးတော့ပါဘူး..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနည်းငယ်တိုက်ခိုက်လာတာတွေ့ ရတော့ ဘာမှားရေးတာရှိလို့ လဲပေါ့
စတိတ်ကျောင်းတက်တော့ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်း မရှိ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်တတ်တော့ ရေနံ အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်ဆိုတော့ မဆဲရေးတတ်ပေမဲ့ တခါတရံတော့ အရေးအသားကြမ်းတာတော့ ရှိတာပေါ့...
အရိုးကျိုး မျိုးကမ်းပွဲသိမ်း အမည်မသိ ဖြစ်ကုန်တာတွေတော့ ရှိတာပေါ့...
ထိန်းရေးရတော့ ရေးချင်တာ မရောက်တာ အများကြီးပါ...
Posted by ငဝန်နဒီ at 3:13 PM No comments:
စေတနာ က ဝေဒနာ ဖြစ်စေ
တချို့ သတင်းတွေ က တိုက်ရိုက်တင်တာ အဆင်ပြေလို့ မူပိုင်ခွင့်အရ တိုက်ရိုက်တင်တာပါ တချို့ တွေ က တမျိုးထင်နေကြတယ်
ကောင်းစေချင်တဲ့ စေတနာ တစ်ခုတည်းပါ ဝေဒနာ မဖြစ်စေချင်ပါ..
တကယ်တော့ စာ ကို ရေးချင်တာတွေ အကုန်ရေးချင်တာပေါ့
ငယ်ငယ်ထဲက အခုချိန် အထိ နောင်တ ဆိုတာ မရှိတဲ့ သူ...ရန်ကုန်မှာ ဘီယာသောက်ပြီး သူငယ်ချင်းနဲ့ဆိုင်ကယ်စီးတုန်းက ဆိုင်ကယ်လမ်းချောတော့ သူငယ်ချင်းက စီးရဲ ရဲ့ လားလို့မေးတာကို မင်းတောင်သေရဲသေးတာ ဘာဖြစ်လို့ မသေရဲ ရမှာလည်း ဆိုတဲ့သူ
အသည်း ရောင်တောင် ၃ ခါ အူရောင်တာ ၂ ခါ အူအတတ် ဖြတ်ရမှာ ကို မဖြတ်ပဲထား ထားတာ မသေခင်မှာ အများအကျိုး ကို တတ်နိူင်သလောက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတာပါ...
အမုန်းတရား ဆိုတာမရှိပါဘူး ချစ်ခြင်းတရား မေတ္တာ တရားပဲ ရှိပါတယ်...တခါတရံတော့ ဥပက္ခာ တော့ထားရတာပေါ့..
အခုစာမရေးဖြစ်တာ စေတနာထားပြီးလုပ်ပေး လိုက်တဲ့ အရာ ကို အစော်ကားခံလိုက်ရတဲ့ အပြင် အနှောက် အယှက်ပါ အပေးခံလိုက်ရတော့ စာရေးတဲ့ အခါ မကောင်းတာတွေ အများကြီးရေးမိမှာ စိုးလို့မရေးတာပါ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စေတနာ တွေ ကို ဒီနေရာ မှာ ပေးမရရင် နောက်တနေရာ မှာ ပေး နေမှာပါ...စေတနာ ဆိုတာ ကုန်သွားတာမှ မရှိတာ...
ရသင့်တဲ့ သူတွေ ဆီကိုရောက်အောင်ပေးနေမှာပါ...
Posted by ငဝန်နဒီ at 2:54 PM No comments:
မောင်ထိပ်ကွက်အား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူ ထောင် ၇ နှစ်ကျ
အသက် ၉ နှစ်အရွယ် မိဘမဲ့ ကလေးအလုပ်သမား မောင်ထိပ်ကွက် (ခ) မောင်စိုးအောင်အား ကိုယ်ထိလက်ရောက် ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခဲ့သည့် You & Me လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ကိုစနိုး (ခ) ကိုဆက်မှူးဌေးဝင်းကို ယမန်နေ့က ဟင်္သာတမြို့နယ် တရားရုံးက ထောင် ဒဏ် ၇ နှစ် ချမှတ်လိုက်သည်။
ကိုဆက်မှူးဌေးဝင်းသည် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့က ၎င်း၏ ဆိုင်မှ စားပွဲထိုး မောင်ထိပ်ကွက် ထွက်ပြေးသည်ကို လိုက်လံ ဖမ်းဆီးကာ ထုတ်တန်း၌ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးဖြင့် စောက်ထိုးဆွဲပြီး တညလုံး ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်ခြင်း၊ ၀မ်းဗိုက်ကို လျှပ်စစ် မီးပူဖြင့် ကပ်ခြင်း၊ အအေးသောက်သည့် ပိုက်ကို မီးရှို့ကာ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ အစက်ချခြင်း၊ ကျင်ငယ်ရေတိုက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကိုဆက်မှူးဌေးဝင်းအား ဟင်္သာတ အမှတ် ၁ ရဲစခန်းက နာကျင်စေမှု ပုဒ်မ ၃၂၄ တခုတည်းနှင့် အမှုဖွင့် အရေးယူခဲ့သော်လည်း မြို့နယ် ဥပဒေအရာရှိ ဦးမောင်မောင်ကြည်ဝင်းက မသေမချင်း ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ပုဒ်မ ၃၂၆ နှင့် မတရားဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်မှု ပုဒ်မ ၃၄၂ တို့ဖြင့် ပြောင်းလဲ တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ဟင်္သာတမြို့နယ် တရားရုံးက ကိုဆက်မှူးဌေးဝင်းအား ပုဒ်မ ၃၂၆ အရ ထောင်ဒဏ် ၇နှစ်၊ ပုဒ်မ ၃၄၂ အရ ထောင် ဒဏ် ၂ နှစ် ယမန်နေ့က အမိန့် ချမှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ပြစ်ဒဏ်များကို တပေါင်းတည်း ကျခံစေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်အတွက် ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်လျှော့ပေါ့ကာ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ကျခံစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒီလိုအမှုမျိုးက ထောင်ဒဏ်တသက် ဒါမဟုတ် ၁၀ နှစ်အထိ စီရင်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုစီရင်ချက်က တရားဥပဒေ မျက်နှာစာက ကြည့်ရင် မျှတတဲ့ စီရင်ချက်ပါ” ဟု ဥပဒေအရာရှိ ဦးမောင်မောင်ကြည်ဝင်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ရေး စနစ်တွင် နိုင်ငံတော်၊ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် အဆင်ဆင့်၌ တရားသူကြီးများ၏ တရားစီရင်ရေး အခွင့်အာဏာကို ခွဲထားကြောင်း၊ မြို့နယ် တရားရုံး တရားသူကြီးတဦး၏ အမြင့်ဆုံး စီရင်ခွင့်အာဏာမှာ ၇ နှစ်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။
ယခု အခင်းဖြစ်ပွားရာဒေသသည် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေး ပါတီ (ကြံ့ဖွံ့ပါတီ) ၏ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးဌေးဦး၏ ဇာတိ မြို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းကိုယ်တိုင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ယင်းမြို့မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
ဦးဌေးဦးကလည်း ဤအမှု နှင့် ပတ်သက်၍ ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဏာရပါတီ အနေဖြင့် ပြည်သူလူထု အတွင်း ဖြစ်ပွား နေသည့် ဖြစ်စဉ်အတိုင်း အမှန်တရားအပေါ် အခြေခံ၍ တရားဥပဒေနှင့် အညီ အဆုံးအဖြတ်ခံယူစေမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို သည်ဟု ပြည်တွင်းထုတ် The Voice Weekly ဂျာနယ်တွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ကလေးသူငယ် ဥပဒေက ရှိပြီးသားပါ။ လိုအပ်မယ် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် ထပ်ဖြည့်သင့်ရင်လည်း ထပ်ဖြည့်မယ်” ဟု ဦးဌေးဦးက ပြောဆိုကြောင်း အဆိုပါဂျာနယ်တွင် ပါရှိသည်။
၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ကလေးသူငယ်များ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေ တရပ် ပြဌာန်းခဲ့သော်လည်း ကလေးသူငယ်များအား နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပုဒ်မ ၆၆ အရ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်သာ အပြစ်ပေးနိုင်ကြောင်း မြို့နယ် ဥပဒေအရာရှိ ဦးမောင်မောင် ကြည်ဝင်းက ထောက်ပြပြောဆိုသည်။
ထိုသို့ ကလေးသူငယ်များ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေတရပ် ပြဌာန်းထားသည်ဟု ဆိုသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရက်ဆိုင်များ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ၊ လောင်းကစားဝိုင်းများတွင် ကလေးသူငယ်များအား အသုံးချမှု အများအပြား ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
မောင်ထိပ်ကွက်၏ အမှုသည် အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်များ၊ facebook လူမှုရေး ကွန်ယက်များမှ တဆင့် တစတစ ပျံ့နှံ့သွားကာ ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာများ၏ စာမျက်နှာများသို့ ရောက်ရှိသွားပြီး လူအများစိတ်ဝင်စားခံရသည့် သတင်းတပုဒ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပြည်ပအခြေစိုက် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာအသံ (DVB) နှင့် ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာနများ အပြင် ပြည်တွင်းမီဒီယာများ ဖြစ်သည့် The Voice Weekly၊ ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်၊ Weekly Eleven ဂျာနယ်များတွင်လည်း အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဟင်္သာတမြို့ခံ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတဦးက “ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာတွေက ရေးလာလို့သာ ဒေသအာဏာပိုင်တွေက ဒီလောက် အရေးယူတာ။ မသိဘဲနဲ့ ပျောက်ပျက်သွားတဲ့ မတရားမှုတွေ အများကြီးပဲ” ဟု ဆိုသည်။
ယခု အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပြည်ပ မီဒီယာများ၌ ပါဝင်သည့် အမှုများအပေါ် အရေးယူမှုများ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းတွင် ရှိလာ ကြောင်း၊ ပြည်သူများ အနေဖြင့် အာဏာပိုင်များထံ တိုင်ကြားရာတွင် အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် စသည်များကို ပေးရပြီး အရေး ယူမှုလည်း မရှိသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ ပြည်ပ မီဒီယာများထံ ပြောကြားပါက မြန်ဆန်သည့်အပြင် ချက်ခြင်းအရေးယူမှုများ ရှိသည့် အတွက် အဆိုပါ မီဒီယာများကို ပိုမိုအားကိုးလာကြကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ယခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အမှုတွင် မီဒီယာကဏ္ဍ၏ အရေးပါမှုမှာ လက်တွေ့ပြသနေသော်လည်း ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြခွင့်မရဘဲ ပျောက်ပျက်သွားသည့် မတရားမှု အများအပြား ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း ၎င်းက ထောက်ပြပြောဆိုသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:31 PM No comments:
နှိပ်စက်ခံရသူ ၉ နှစ်အရွယ် မောင်ထိပ်ကွက်အမှု တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးပြီးအစိုးရရှေ့နေ ဦးမောင်မောင်ကြည်ဝင်းက ကလေးအတွက် ဆောင်ရွက်
ဧရာဝတီတိုင်း ဟင်္သာတမြို့က ၉ နှစ်အရွယ် မိဘမဲ့ကလေး မောင်ထိပ်ကွက် (ခေါ်) စိုး​ထက်​ အောင် အပြင်းအထန် နှိပ်စက်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီနေ့ ဇူလိုင် ၈ ရက်နေ့မှာ တရားခံပြ နောက်ဆုံးသက်သေကို မြို့နယ်တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးပါတယ်။
ခုလ ၄ ရက်နေ့က အမှု စတင်စစ်ဆေးရာမှာ တရားလိုနဲ့ တရားလိုပြ သက်သေကို စစ်ဆေးပြီး ဖြစ်သလို ဒီနေ့မှာတော့ စွဲဆိုခံရသူရဲ့သက်သေကို စစ်ဆေးပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
တရားလိုဘက်ရော တရားစွဲခံရသူဘက်ကိုပါ စစ်ဆေးပြီးဖြစ်လို့ အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက် ကြားနာဖို့ ချိန်းဆိုထားတယ်လို့ မောင်ထိပ်ကွက်ဘက်က လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်တဲ့ အစိုးရရှေ့နေ ဦးမောင်မောင်ကြည်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
“တရားလိုဘက်က နိုင်ငံတော်ဘက်က လိုက်ပေးတာပါခင်ဗျ။ အခု အပြီးသတ် လျှောလဲချက်ကို ကြားနာဖို့ ချိန်းထားပါတယ်ခင်ဗျ။ နှစ်ဘက်စလုံးက လျှောက်လဲမှာပါ။ လျှောက်လဲချက်တွေ ပေးပြီးတော့မှ တရားရုံးကနေ အမိန့်ချမှာပါ။”
ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြန်ဆုံးစစ်ဆေးပြီး ထိရောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျနိုင်ဖို့ ကြိုးစား နေတယ်လို့လည်း ဦးမောင်မောင်ကြည်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
မောင်ထိပ်ကွက်ကို နှိပ်စက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မောင်ထိပ်ကွက်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေက ရဲတပ်ဖွဲ့ကို တိုင်ကြားပြီး နှိပ်စက်သူ ကိုစနိုးကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂၆ အပြင်းအထန် နာကျင်စေမှု၊ ပုဒ်မ ၃၄၂ မတရားချုပ်နှောင်မှုတို့နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့က တရားစွဲထားတာပါ။
ဒီပုဒ်မနှစ်ခုအရ သက်ရောက်နိုင်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်နဲ့ မြို့နယ်တရားရုံးက စီရင်ချက်ချနိုင် ခွင့်ကို ဦးမောင်မောင်ကြည်ဝင်းက ရှင်းပြပါတယ်။
“ပုဒ်မ ၃၂၆ က တသက်တကျွန်းဖြစ်စေ၊ ၁၀ နှစ်အထိ ထောင်ဒက်တမျိုး ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမယ်လို့ ပါပါတယ်ခင်ဗျ။ ပုဒ်မ ၃၄၂ ကတော့ တနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ တထောင်အထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ နှစ်ရပ်စလုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ က မြို့နယ်ဥပဒေမှာ စစ်တာပါ။ ဥပဒေက အဲဒီလိုချမှတ်ထားပေမယ့် မြို့နယ်တရားရုံးက စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအရ အများဆုံးချမှတ်နိုင်တာက ၇ နှစ်ပါပဲခင်ဗျ။ မြို့နယ်ဥပဒေရုံးအနေနဲ့ မြန်မြန်နဲ့မှန်မှန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ ကြိုးစားခဲ့ပါ တယ်။ ပြီးတော့ ထိရောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ရနိုင်ဖို့အတွက်ကို ကျနော်တို့ဘက်က ကြိုးစားနေပါ တယ်ခင်ဗျ။”
စီရင်ချက်ချမယ့်ရက်ကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ မောင်ထိပ်ကွက်ဟာ You and Me လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ပြီး ကိုစနိုးက သူ့ကို ကြိုးတုပ်ရိုက်နှက်၊ ခန္တာကိုယ်ကို မီးပူနဲ့ကပ်လို့ ဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့သလို ခွေးမစင်နဲ့ ကျင်ငယ်ပါ အတင်း ကျွေးတာတိုက်တာ ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ ကိုစနိုးရဲ့ဇနီးသည်ပါ ပါဝင်တယ်လို့ ကာယကံရှင် မောင်ထိပ်ကွက်က ပြောပါတယ်။ သူ့အတွက် အမှတ် ၁ ရဲစခန်းက တရားလို အဖြစ် အမှုဖွင့် ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အစပိုင်းတုန်းကတော့ ပုဒ်မ ၃၂၄ သာမန်နာကျင်စေမှုနဲ့ အမှုဖွင့်ခဲ့ပေမယ့် ဥပဒေ အကြံပေး ဦးမောင်မောင်ကြည်ဝင်းက ပုဒ်မ ၃၂၆ နဲ့ ၃၄၂ တို့နဲ့ ပြောင်းလဲပြီး တရားစွဲထား တာပါ။
မောင်ထိပ်ကွက်ရဲ့ ကျောကဒဏ်ရာ သက်သာသွားပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ဗိုက်ကဒဏ်ရာကတော့ ပြင်းထန်နေတုန်းပဲလို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာ ပွိုင့်ဝိကလီဂျာနယ် က တရားခံ ယောက္ခမ ဖြစ်သူ ဦးဥာဏ်လင်းထွန်းက မီးပူဖြင့် ထိုးတာမပြောပဲ အပြစ်မရှိသလို ရိုက်နှက် နိူင်သကဲ့သို့ ကြိုးဖြင့်ရိုက်တာ ပါ ..ကလေးငယ်အား နှိပ်စက်သည်ကလေးငွေယူသွားသည် အထိစွပ်စွဲ ပြောဆိုထားသည်...ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်တခြားပါတီ တစ်ခုတို့ က ကလေးအား ငွေ နှစ်သောင်း ကူညီသည်ဟုဆိုသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 3:44 PM No comments:
ကလေးငယ်တစ်ယောက် သေကောင်းပေါင်းလည်းဖြစ်နေချိန်မှာ နိူင်ငံဦးဆောင်ချင်သူက အလည်သွားနေ
ဒီမိုကရေစီ လိုချင်တယ်ဆို လူ့ အခွင့်အရေး ကို လုပ်ပေးနိူင်မှလေ...
၁၉၉၀ ရလဒ် အဖြေမရခဲ့တာ လည်း အခုဆို ဟင်္သာတ က ကလေး အတွက် မြန်ပြည်သားတိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေချိန် မှာ
မြန်ပြည် အရေး လုပ်ဖို့ ကြွေးကြော်နေသူတွေ ဘာလုပ်နေလဲ...
ရှေ့ နေ လည်းမရှိ ငွေကြေးလည်းမတတ်နိူင် ဘယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှ မကူညီ
ဘယ်ပါတီမှ မလာ...ပါတီဆိုတာ အခွင့်အရေးရမှလား
ရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်...နိူင်ငံတကာ သတင်းစာမျက်နှာမှာ ဟိုပြောဒီပြော လုပ်ဖို့ ပဲလား မြန်မာပြည်သားတွေ ကို ကူညီဖို့ ပါတီ စည်းမျဉ်းမှ မပါလာလို့ တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စာရွက်တွေ ထုတ်ယုံ နဲ့မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီ အဝေးကြီးမှာပါ...
ကလေးငယ်လေး တစ်ယောက်ကို တောင် မကူညီ နိူင်တဲ့ ပါတီ ဒီမိုကရေစီ မအော်ခင် လူအခွင့်အရေးကို ဆည်းပူးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်...
ပါတီက ရန်ကုန်မှပဲ ကိုး ...ဟင်္သာတ မှာမှ မရှိပဲကိုး...
ကလေးအား ကူညီရန် ဆက်သွယ်နိူင်သော ပေးပို့ နိူင်သော နေရာ အား မှတ်ချက်ရေးသားထားခဲ့နိူင်ကြပါစေ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:59 PM No comments:
မြန်မာ စာ ဆိုတာ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ သတင်းဌာန တွေ က သူသတင်းသူများဖတ်မှာ စိုးလို့ လား မြန်မာ ဖောင့်စ်တွေ ပေါကြွယ်ဝလို့ လား မြန်မာ တွေ ဒီမိုကရေစီ စတိုင်လေလားတော့ မသိ
မြန်မာသတင်း ဖတ်ရဖို့ အရေး ဟိုလို လုပ်ရ ဒီလိုလုပ်ရ နဲ့ 
ဟိုဖောင့်စ် နဲ့ မှ ဒီဖောင့်စ် နဲ့ မှ
မြန်မာ စာ ကို မြန်မာ လိုလွယ်လွယ် ကူကူ ဖတ်မရအောင် လုပ်နေမှ တော့ သတင်းဌာန ဆိုပြီး ငွေ တောင်း အိပ်ဖောင်းပြီး အိပ်နေလိုက်ပါတော့လား...
တရေးနိုးရင် သူများတွေ ဖတ်မရအောင် သတင်းတင် ငွေတောင်း အလှူခံ လစာထုတ်အိပ်နေ လိုက်ပါ...
လက်ညောင်း သက်သာအောင်နေ လိုက်ပါတော့...ထန်းလျှက် နိူင်ငံ က လစာပေးမှာပါ...
(ထန်းလျှက် ကရင်စကားမှ ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်)
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:49 PM4comments:
ပင်စင်စားတွေ အတွက် မုဒိသာပွားစရာ...ဝမ်းသာစရာ သတင်းစကားနောက်က အဆင်မပြေစရာတွေ ကြားရတော့ မရေးချင်တာရယ် မှားနေတာ တစ်ချို့ ကို တွေ့ ရတာ မပြောချင်တာလည်းပါတယ် အခုတော့ သိသင့်တာတွေ ထင်လို့ ရေးမှာပါ။
တစ်ချို့ ပင်စင်စားတွေ ကို မူရင်းစာရွက်တွေ တောင်းတော့ အဆင်မပြေတာတွေ ပြောကြတော့ တကယ်တော့
တစ်ချို့ က သူတို့ ရဲ့ ပင်စင်လစာကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ရောင်းထားကြတာတွေ ရှိတယ်။ပေါင်ထားတာတွေ ရှိပါတယ်။
အဲလိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေ မနစ်နာရလေအောင်လို့ ထင်တာပဲ..မူရင်းစာရွက်တွေပါမှ ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အမှန်တကယ် ပင်စင်စားတွေ လက်ထဲကိုပဲ ထည့်ချင်လို့ ထင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ခရီးစရိတ်အတွက် အဆင်မပြေတာတွေ တော့ ရှိမှာပါ ထောင်မြင် ရာစွန့် ရမှာပေါ့။
အပေါင်ခံထားတဲ့သူတွေ ဝယ်ထားတဲ့သူတွေ ဆီမှာတော့ မူရင်း တွေ ရှာဖို့ ခက်တာကို ဟိုပြောဒီပြော ပြီးဒီအတိုင်းထုတ်လို့ ရဖို့ ကြိုးစားနေမှာပါ...
သတင်းတစ်ခုမှာပါလာတော့ သတင်းသမားတွေ ဒီအဖြစ်အပျက်မျိုးမကြားဘူး မတွေ့ ဘူးလို့ ဖြစ်မယ်ထင်လို့ ရေးလိုက်တာပါ။
....နောက်တစ်ခုက မြန်ပြည် လူငယ်တစ်ချို့ ဂျပန်ကို လေ့လာရေးလာမှာပါ။
ပါတီစုံက လူငယ်တွေ လာမှာ ဆိုတော့ တစ်ဦးတည်းမူပိုင်ဖြစ်စေချင်တဲ့ လက်ပါးစေ တွေ ကလည်း သတင်းမရေးတာတွေ့ ရတယ်
ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူတွေ ကလည်း တစ်ဦးတည်းမူပိုင်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေ ပါမှာဆိုတော့ မရေးတာတွေ့ ရတယ်။
ဘာလိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာလူငယ်တွေ နိူင်ငံတကာ ကို လာလေ့လာမှာဝမ်းသာစရာပါ အကျိုးပြုသောပါတီဖြစ်စေ အကျိုးမပြုသောပါတီဖြစ်စေ..
လူငယ်တွေ လက်ထဲကို အတွေးသစ် အမြင်သစ်တွေ ရမှာ ဝမ်းသာစရာပါ။ ချက်ချင်းပြန်ရောက်လို့ လုပ်လို့ မရနိူင်ပေမဲ့ တစ်ချိန်ချိန်တော့ လုပ်ခွင့်ရတဲ့တစ်နေ့ တော့ရှိလာမှာပါ။
သဘောထားကွဲလွဲသူတွေ တစ်ခရီးထဲသွားရမှာပါ...ဘာတွေ အဆင်ပြေလာမလဲတော့မသိပေမဲ့...အတွေ့ အကြုံကောင်းတွေ ရနိူင်ပါစေလို့ ရည်သန်ရင်း...
နောက်တစ်ခုကတော့ နိူင်ငံတကာ သတင်းလေးပါ...ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ မှာ အတိုက်အခံပါတီ အနိူင်ရသွားတာပါ။
တကယ်တော့ ကိုယ့်ပြည်သူကို သတ်တဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကို အလိုမရှိတာသိသာသွားတာပါ...နှစ်နိူင်ငံသားခံယူထားတဲ့သူက အုပ်ချုပ်တာကို အလိုမရှိတာပါ သိသာသွားပါတယ်
အရွေးချယ်ခံရတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်သစ်ဖြစ်မဲ့ သူက မဲဆွယ်တုန်းက လယ်သမားတွေ ကို ခရက်စ်ဒစ် ကဒ်တွေ လုပ်ပေးမယ်လို့ မဲဆွယ်ခဲ့တာ တကယ်ဖြစ်လာမှာလား ကြည့်ရမှာပါ။
မြန်မာပြည်မှာရော မြန်မာပြည်သား တွေ စောင့်ကြည့်နေရင်းပေါ့...
ရက်တစ်ရာ မကျော်ခင် နှစ်ခုတော့ ထူးပါတယ်
ဒေါ်လာဈေးကျသွားတာရယ် ပင်စင်စားတွေ ဝင်ငွေတိုးလာမှာကိုပါ...
အဆင်မပြေသေးတာကတော့ ဒေါ်လာဈေးကျသောလည်း အစိုးရသစ် ဒီဇယ်ဓာတ်ဆီဈေး ချမပေးနိူင်သေးတာပါ...
ဒီဇယ်ဓာတ်ဆီရောင်းချခွင့်ရသူတွေ က အခွင့်ထူးခံတွေ မို့ လို့သမ္မတ အထက်ကနေ အာဏာ ရှိနေသေးတာကို မသိမသာပြနေတာတွေ့ နေရတာပါ...
ဒီဇယ်ဓာတ်ဆီဈေး ကျလာရင်တော့ အစိုးရသစ် အခွင့်ထူးခံတွေ ကို ထိန်းချုပ်လာနိူင်လို့ ပေါ့...
မထိန်းချုပ်ပဲ မှောင်ခိုတင်သွင်းခွင့်ကို မသိမသာ ခွင့်ပြုလိုက်ရင် အခွင့်ထူးခံတွေ ကို ပြောစရာမလိုပဲ ဈေးကျလာမှာပါ။
တစ်ချို့ ဝန်ထမ်းတွေလည်း အဆင်ပြေ..သမ္မတလည်း ဂုဏ်တတ်လာမှာပေါ့...
အစိုးရဝန်ထမ်း ပင်စင်စားများ၏ ပင်စင်နှုန်းထားကို ဇူလိုင်လမှသည် တိုးမြှင့်ပြီး အလုပ်လုပ်စဉ်က ရရှိခဲ့တဲ့ လစာအတိုင်း ပေးမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်အား နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့ရုပ်သံက ကြာသပတေးနေ့တွင် ကြေညာလိုက်သည်။
ညနေ ၆ နာရီတွင် မြန်မာအသံ ရုပ်မြင်သံကြားက ထုတ်လွှင့်သွားရာမှာ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည့် လစာနှုန်းထားအသစ် အရ ခံစားခွင့်ကို လာမည့် ဇူလိုင်လ လစာမှ စတင်၍ ထုတ်ပေးသွားမည်ဟု ပါရှိသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:22 AM No comments:
Ms. Makiko KIKUTA နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံ
ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပါလီမန်ဒုတိယဝန်ကြီး Ms. Makiko KIKUTA (အကျီစိမ်းနှင့်) နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဆွေးနွေးပွဲအပြီး ရန်ကုန်မြို့ အမျုိုးသား ဒီမိုကရေစီ ရုံးချုပ်တွင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဇွန် ၂၉ ရက်၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်က တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- မဇ္ဈိမ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:22 PM No comments:
မြန်ပြည်အစိုးရသစ် မြန်မာနိူင်ငံသား ထိုးကြိတ်ခံရမှု ကို မကာကွယ်နိူင် တရုတ်အား ကြောက်ရ
မြန်ပြည်အစိုးရသစ် လက်ထက် မြန်မာပြည်သား တစ်ဦး အထိုးအကြိတ်ခံရမှု ကို မြန်မာနိူင်ငံသားများ မည်သူမျှ အရေးမယူပေး ပါ။
မြန်ပြည် ရဲ စစ်တပ် တွင် လက်နက်များ ရှိသော်လည်း မြန်ပြည်သား အားတရုတ်နိူင်ငံသား က ထိုးကြိတ်သွားသည်ကို မည်သို့ မှ ပြန်မလုပ်နိူင်ပါ။
ပြီးခဲ့သောလ က တရုတ်အား မြန်မာ ကုန်သည်က ထိုးမိသဖြင့် ထောင် ၆လ ထောင်ချလိုက်သည်။
ယခု တွင်မှု မြန်မာပြည်သားအား မြန်မာပြည်တွင်း ဝင်ရောက်ပြီး ထိုးကြိတ်သွားသည် ကို မည်သို့ မျှ အရေးမယူပေးသည့်အပြင် မြန်ပြည်အစိုးရသစ် မည်သို့ မျှ မကာကွယ်ပေးနိူင်ခဲ့ပေ။
၁၉၇၆ ခုနှစ် ဦးနေဝင်းလက်ထက် တွင် တရုတ်မြန်မာ အရေးအခင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ အရေးအခင်းဖြစ်ရန်အတွက် ယခု သတင်းကို ရေးသားခြင်းမဟုတ် ...မြန်မာနိူင်ငံသား တစ်ယောက်အား မြန်မာပြည်တွင်နေထိုင်နေသော်လည်း တရုတ်အား ကြောက်နေရခြင်း ထက် မြန်မာပြည်သားများ ဘဝလုံခြုံမှု အကာအကွယ် ကင်းမဲ့ မှု အား မြန်မာပြည်သားများသိရှိပြီး
မိမိကိုယ့်ကို ကြိုတင်ကာကွယ် နိူင်ရန်အတွက် သတိဖြင့်နေထိုင် ဘေးအ န္တရာယ်ကင်းဝေးနိူင်ကြပါစေ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:16 PM No comments:
ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူမြို့ တွင် .နေ့ လည် ဗုံးပေါက်
ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူမြို့ မိတ္တဗလလမ်းပေါ်ရှိ ခပေါင်းခန်းမနှင့် မိုးလုံလေလုံခန်းမရှေ့ လမ်းထောင့်တွင် ယနေ့ နေ့လည် တွင် ဗုံးတလုံးပေါက် ကွဲသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:11 PM No comments:
မန္တလေး ကျောက်ဝိုင်း မှ ဓာတ်ပုံ များ ထိုးကြိတ်သောတရုတ်ကျောက်ကုန်သည်အားအရေးမယူသေး
မဇ္ဈိမ.ဧရာဝတီ .ဒီဗွီဘီ မှ ဓာတ်ပုံများကို စုစည်းတင်ပြသည်။
တရုတ်ပြည်မ ကရောက်လာသော တရုတ်က မြန်မာကျောက်ကုန်သည် ကိုမော်ကြီး ကိုထိုးကြိတ် သဖြင့် ဆေးစာဖြင့် ဆေးရုံ သို့ ရောက်နေသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လ က မြန်မာကုန်သည် က ထိုးကြိတ်မိသဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၆ လ ကျခံလိုက်ရသည်။
မြန်မာကျောက်ကုန်သည် ကို ထိုးကြိတ်လိုက်သော တရုတ်ကျောက်ကုန်သည် ကို မည်ကဲ့သို့ အရေးယူပေးမည်ကို စောင့်ကြည့်ရပေမည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:03 PM No comments:
မျိုးဆက်သစ် မှာလည်း သူ့ သမိုင်း သူ့ အတွေး တွေ ရှိေ...
အိုင်ဖုန်း ၄ အက်စ် လည်း အေယူ မှာဆိုတော့ ထူးမခြားနာ...
အိုင်ဖုန်း ၄အက်စ် ဘက်ထရီ စားသက်သာအောင် ပိတ်ရမည့်အရ...
iphone 4s Iso 5.0.1 update လုပ်လုို့ ရပြီ။ဘက်ထရီပ...
မြန်မာပြည် ကား Show Room ဖွင့်တော့မည်။ ကားဟောင်းဖျ...
“သမ္မတက ခေါ်တာလည်း အမှန်တကယ်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ဥပဒေတွေကလည်...
ပြန်လာချင် ပြန်လာ မလာလို့ ကတော့ နိူင်ငံတစ်ကာနဲ့ ပူ...
ထရံပေါက် က နေခြည်ပျောက် ကောက်မရနိူင် အလင်းရောင်တော...
နေ့ ရက် များရဲ့အတိတ်ကို တမ်းတခြင်းထက် ဖော်ဆောင်...
မြန်မာဘလောက်စ် နဲ့ စမ်းတင်ကြည့်တာပါ။ဂျပန်ယမ်းနဲ့ ...
နှိပ်စက်ခံရသူ ၉ နှစ်အရွယ် မောင်ထိပ်ကွက်အမှု တရားရုံ...
ကလေးငယ်တစ်ယောက် သေကောင်းပေါင်းလည်းဖြစ်နေချိန်မှာ န...
Ms. Makiko KIKUTA နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ...
မြန်ပြည်အစိုးရသစ် မြန်မာနိူင်ငံသား ထိုးကြိတ်ခံရမှု ...
မန္တလေး ကျောက်ဝိုင်း မှ ဓာတ်ပုံ များ ထိုးကြိတ်သောတ...